Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/23 Novambra 2013 - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin'ny gazety/23 Novambra 2013
nitana (nitranga in-3) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
Ankilan' (nitranga in-1) : Ankilan'izay rehetra izay anefa dia tsy niolaka mihitsy ny kandidà Camille Vital izay nahazo isam-bato 6,85% omaly raha nilaza fa «tsy misy maharesy lahatra ahy mihitsy ireo kandidà roa hiatrika an'io fifidianana fihodinana faharoa io ». (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Manakara (nitranga in-1) : Tany Manakara indray dia voalaza ihany koa fa nampiasa fiaram-panjakana an'ny Antenimierampirenena ny mpikambana iray ao amin'ny Kaongresin'ny tetezamita nanao fampielezan-kevitra ho an'i Hery Rajaonarimampianina. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
nahasakana (nitranga in-1) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Ranomasimbe (nitranga in-3) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
hanasitrana (nitranga in-1) : Dona lehibe ho anay ny nahalalana fa tsy misy fanafody afaka hanasitrana an'i Achille mihitsy”, hoy Raveloarinosy Mbolatiana. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Nahatratra (nitranga in-1) : Nahatratra 5774 ny vaton'ity kandidà nahazo ny laharana faharoa ity no nofoanana noho ny antony maro. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Raveloarinosy (nitranga in-2) : Mitantara ny iainan'ny zanany, Raveloarinosy Mbolatiana, renin'i Achille. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Saint (nitranga in-2) : Niara-niasa izy mirahalahy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina saingy nifindra tampoka tany amin'ny AS Saint Michel i Raux teny antenantenan'ny fifaninanan' Analamanga. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Elephant (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
C'est fini la Côte d'Ivoire arrache sa qualification après 90 mn de suspens, les Elephant seront au Brésil. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
fahatapahan' (nitranga in-1) : tsy tanàna vitsivitsy intsony no mitaraina noho ny fahatapahan'ny herinaratra. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
Andoharanofotsy (nitranga in-1) : Hatairana sy hagagàna ny an'ity tovovavy miasa amin'olona eny Andoharanofotsy raha nidiran'ny varatra tao an-tokan­trano, ny talata teo tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, tamin'ny fotoana nisian' ny orambe iny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
gueule (nitranga in-1) : ity :
Photo prise en Algérie, on est tellement a fond #AlgeriePresenteAuBresil ma gueule. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Raveloarison (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
hampahafantarana (nitranga in-1) : Matetika mihaona amin'ireo olona liana amin'ny hetsika rehetra atao ao amin'ny tontolon'ny GV izahay, saingy tsy dia fantany loatra ny fomba ahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo, ka napetraka izany fihaonana izany mba hampahafantarana amin' ireo olona ny Global Voices sy ny tetikasany madinika, Lingua, Advox ary ny Rising Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
hanehoana (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Fanante­nana (nitranga in-1) : Teo amin'ny telo segaondra teo fotsiny ny faharetan'izany ary dia tsy hita izay nalehany avy eo », araka ny nambaran'i Hery Fanante­nana Mendrika Romina, 18 taona miasa amina fianakaviana iray eny Atsimon­drano eny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
nahalalana (nitranga in-1) : Dona lehibe ho anay ny nahalalana fa tsy misy fanafody afaka hanasitrana an'i Achille mihitsy”, hoy Raveloarinosy Mbolatiana. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
niorenany (nitranga in-1) : Teny faneva nosafidin'izy ireo ny hoe « Havan'ny olona rehetra sy mpirahalahy daholo ny Tily », noho izany dia tsy anavahana finoana fa rehefa Tily dia hiara-hankalaza ny faha-90 taona niorenany avo­koa ny 30 novambra ho avy izao. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Skopje (nitranga in-1) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
نكون (nitranga in-1) : الأصوات العالمية: من نكون. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Rinisoa (nitranga in-1) : «Efa nahare feo aza izahay fa mikasa ny hamoaka rakikira amin'ireo sanganasan'i Médicis izy ireo», araka ny fanazavan'i Nicoletta Rinisoa na Coco, renin'i Vavara Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
tian' (nitranga in-2) : Na dia averimberina matetika aza fa lalao fotsiny ihany ireny lalao ireny, ny fihetsika ataon'ny olona aloha sy aorian'ny lalao sasany no maneho fa misy zavatra hafa kokoa tian'ny rehetra hametrahana azy ireny. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
seiseloa (nitranga in-1) : Mpanazatra maorisiana, seiseloa, kaomoriana ary avy any Rodrigues no mandray anjara hatramin'ny 6 desambra ho avy izao. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Ralitera (nitranga in-2) : Miangaly Ralitera. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
herramientas (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Los participantes de esta experiencia ya han logrado incorporar herramientas para el manejo básico de PC, han disfrutado de redes sociales, aprendieron a compartir sus spots de audio en distintos programas de internet, y ahora se encuentran aprendiendo a utilizar el equipamiento de la radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
nampihinjakinjaka (nitranga in-1) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Stef' (nitranga in-4) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
hanakatona (nitranga in-1) : Milaza ny hanakatona ny biraon'izy ireo manerana ny Nosy ny mpiasa eo anivon'ny Tahirim-bolam-panjakana. (Tapatapany)
hanalana (nitranga in-1) : «Tapaka kely roa minitra dia miverina ny jiro aty aminay, tsy manam-potoana hanalana ireo fitaovana rehetra mifandray amin'ny herinaratra akory izahay dia miverina indray ilay jiro, amin'ny herinaratra ambany dia ambany. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
mahatafita (nitranga in-2) : notanterahina tamin'ny herinandro lasa teo [sy tamin'ity herinandro ity] ny lalao fanintsanana maharendrika na mahatafita ho any amin'ny Mondialy 2014 ho an'ny faritra Afrika sy Eoropa. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
hirosoana (nitranga in-1) : Izany no hiantoka sy hitondra antsika any amin'ny famahana ny krizy sy hirosoana any amin'ny Repoblika
faha-IV ». (HOY RY ’ZALAHY)
facebook (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Mpanoratra Eddie Avila · Nandika Naomy
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Advox (nitranga in-1) : Matetika mihaona amin'ireo olona liana amin'ny hetsika rehetra atao ao amin'ny tontolon'ny GV izahay, saingy tsy dia fantany loatra ny fomba ahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo, ka napetraka izany fihaonana izany mba hampahafantarana amin' ireo olona ny Global Voices sy ny tetikasany madinika, Lingua, Advox ary ny Rising Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
fahatapahana (nitranga in-1) : Tsy fahatapahana maharitra anefa, fa irony tapaka kely, anefa misesi­sesy irony. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
LiliaAyew⚪️Ⓜ️ (nitranga in-1) : com/pYUpqOMnE0
— LiliaAyew⚪️Ⓜ️ (@LiliaKapoor) November 17, 2013 Kamerona 4-1 Tonizia, ny mpihatsara-velatsihy ao amin'ny “Twitter” mody malahelo nefa “ao an-trano”, falifaly…LOL Frantsa vs. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Mondialy (nitranga in-2) : notanterahina tamin'ny herinandro lasa teo [sy tamin'ity herinandro ity] ny lalao fanintsanana maharendrika na mahatafita ho any amin'ny Mondialy 2014 ho an'ny faritra Afrika sy Eoropa. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
1585% (nitranga in-1) : Voafidy hiatrika izany ny kandidà Jean Louis Robinson izay nitana ny laharana voalohany tamin'ny isam-bato 21,16% sy ny kandidà Hery Rajaonarimampianina izay nahazo vato 15,85%. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
nahena (nitranga in-1) : Voatery nahena ny entana”, hoy i Zafisoa Mahery Ny Aina, mpivarotra hazan-dranomasina etsy Ankadilalana. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
zon' (nitranga in-3) : «Efa mipetraka eo anivon'ny ofisy malagasy miaro ny zon'ny mpamorona io maha mpandova ny zanany io ary izahay no efa nandray ny zon'ny mpamorona tamin'ny anaran'i Médicis efa ho roa taona izao», hoy ihany izy. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Paulin (nitranga in-2) : com/L8YTbiUDYo
— Ana Djazairi Mahboul (@DjalilYougo) November 20, 2013 Ny fifanenjanana nandritra ny lalao mandroso notanterahina tamin'ny 12 Oktobra no nitarika ireo mpanohana sasany namoaka ompa fanivaivana ara-poko tamin'ilay mpitsara mainty hoditra, araka ny hita amin'ireto pikantsarin'i Paulin Diasivi ireto: Pendant le match Burkina vs Algerie qlq twitt raciste des supporteurs algeriens pic. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
incorporar (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Global (nitranga in-7) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nosoloina (nitranga in-1) : Tsy sokajian'ny mpitondra mbola ho faritra tena hisian'ny asan-jiolahy ve izany ireo faritra sasany toa an'Analamanga ohatra, matoa tsy mba nosoloina miaramila ny Lehiben'ny faritra tao. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
haifanitsiampiteny (nitranga in-1) : Natao fitiliana haifanitsiampiteny indray izy, teo no noeritreretina ny mety ho maha “autiste” azy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
aprendieron (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
radio (nitranga in-3) : Ho an'ireo mpandray anjara marobe, ny lohahevitra resahana amin'ny atrikasa dia loharanom-pampidirana lohahevitra vaovao mifandraika amin'ny fandaharana mivantana efa misy isaky ny herinandro ao amin'ny radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
kaikitry (nitranga in-1) : Areti-mifindra vokatry ny kaikitry ny moka ny ongobe. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
André (nitranga in-1) : Hisokatra anio ao Vacoas ny fampianarana tarihin'i André Glaive, manam-pahaizana frantsay iraka manokan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
vodilaharana (nitranga in-1) : Nisy tao amin'ny lohalaharana no lasa miandry vodilaharana. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
Ikopa (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
Fandaharam-potoana Sabotsy 23 novambra 2013 Vehivavy TOP 6 9 ora: CPI # OCA 11 ora: Mata # Rosa Junior manasa-dalana 1 ora: JCA # US Ikopa 3 ora: FTM # USA Alahady 24 novambra 2013 Vehivavy Top 8 9 ora: 3FB # UASC 11 ora: SCB # FTFA Top 14 manasa-dalana 1 ora: COSFA # IRC 3 ora: 3FB # TFMA Samy hiatrika ny manasa-dalana fa tsy hifandona anio ny Cosfa sy 3FB. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Vakinan­karatra (nitranga in-1) : Mpanakanto mpanoratra maromaro ary avy an-drenivohitr'i Vakinan­karatra no hiakatra ny sehatra ka hiezaka ny hanazava sy haneho amin'ny zavakanto ny «Tsikafona». (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
Claude (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
mehana (nitranga in-1) : «Ny fiatrehana ny fifidi- anana solombavambahoaka aloha izao no laharam-paha- mehana. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Ramaroson (nitranga in-1) : Tsy ny hazan-dranomasina rehetra anefa no tsy azo hohanina, fa ireo nihinana poizina ihany ” hoy ny fanambarana nataon'ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Olga Ramaroson. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Ambalanirana (nitranga in-1) : ***Voatifitra teny ambony môtô> Notifirin'ny jiolahy tamin'ny basy teny ambony môtô ireto lehilahy mpianaka avy namonjy tsena tany Ambalanirana, fokontanin' Ankianja­mandroso,ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 6 ora hariva. (Sombiny)
Faso (nitranga in-3) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Ankianja­mandrosony (nitranga in-1) : ***Voatifitra teny ambony môtô> Notifirin'ny jiolahy tamin'ny basy teny ambony môtô ireto lehilahy mpianaka avy namonjy tsena tany Ambalanirana, fokontanin' Ankianja­mandroso,ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 6 ora hariva. (Sombiny)
Romina (nitranga in-1) : Teo amin'ny telo segaondra teo fotsiny ny faharetan'izany ary dia tsy hita izay nalehany avy eo », araka ny nambaran'i Hery Fanante­nana Mendrika Romina, 18 taona miasa amina fianakaviana iray eny Atsimon­drano eny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
podcasts (nitranga in-1) : Mpandray anjara hafa kosa mahay momba ny fikirakirana feo sy lahatsary, ary liana tamin'ny GV podcasts. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
hanovana (nitranga in-1) : me, izay hanoratany momba ny fampiasana sary ho entina hanovana ny fitondra-tenan'ny olona. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
maherisetra (nitranga in-1) : Manana ny toe-tena maherisetra sy mihetraketraka na “autiste hyperactif” i Achille. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
nahatazana (nitranga in-1) : Mbola nilaza ho nahita izany hazavana be nitaratra nihodinkondina nandritra ny fotoana vitsy avy tao am­bony rihana izany ihany koa anefa ireo fianakaviana hafa monina ao ambany rihana tamin'io fotoana io, ary nihiaka mafy sy nian­tsoantso raha nahatazana izany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
nampitaintaina (nitranga in-1) : Tonizia
Tsy nampitaintaina loatra ny lalao nifanaovan'i Kamerona nandresy an'i Tonizia tamin'ny isa 4-1. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
StumbleUpon (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
afak' (nitranga in-1) : Nanomboka afak'omaly ary nitohy omaly ny fanenjehan'ny mpitandro ny fila­minana an'ireo jiolahy. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
manejo (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
nigadona (nitranga in-1) : Vao nigadona ny tamin'ny 10 ora maraina omaly dia niditra ny efitrano malalaka ao amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana ireo mpikambana 18 ao amin'ny Ces nilaza ny voka-pifidianana ofisialy. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Ratsiraka (nitranga in-2) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
hitandrina (nitranga in-1) : Tokony hitandrina amin'ny fihinanana hazan-dranomasina ny rehetra amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
isafidianana (nitranga in-1) : Nampahafantatra vetivety momba ny Creative Commons sy ireo karazana fahazoan-dalana azo isafidianana i Mohamed Adel avy eo. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Antenimierampirenena (nitranga in-1) : Tany Manakara indray dia voalaza ihany koa fa nampiasa fiaram-panjakana an'ny Antenimierampirenena ny mpikambana iray ao amin'ny Kaongresin'ny tetezamita nanao fampielezan-kevitra ho an'i Hery Rajaonarimampianina. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Raholdina (nitranga in-1) : «Hiezaka izahay ny tsy handraraka ilo mby an-doha amin'ny maha solontenan'ny ekipana fokontany anay», hoy i Faneva Raholdina, mpanazatra ny TFMA feno fanantenana amin'ny hisalorana ny anaram-boninahitra eto Analamanga. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
PTDRRR (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
Cameroun 4-1 Tunisie, les gens hypocrites “sur twitter” vs “chez eux” avouez … PTDRRR pic. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
nahitana (nitranga in-3) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Rakotoharisoa (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Andriamora (nitranga in-1) : Niry Andriamora sy RA-PHI no navondrona ao anatin'ny «Tsinkafona». (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
nisian' (nitranga in-2) : Hatairana sy hagagàna ny an'ity tovovavy miasa amin'olona eny Andoharanofotsy raha nidiran'ny varatra tao an-tokan­trano, ny talata teo tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, tamin'ny fotoana nisian' ny orambe iny. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Kameroney (nitranga in-1) : Na izany aza, mbola misy ihany ny fifandirana kely raha nilaza i Tonizia fa misy Kameroney roa tsy tokony hilalao. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
5774 (nitranga in-1) : Nahatratra 5774 ny vaton'ity kandidà nahazo ny laharana faharoa ity no nofoanana noho ny antony maro. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
nanamarika (nitranga in-1) : Tsy nisy na inona na inona nanamarika ilay aretina teo amin'ny sofina akory anefa nandritra ny fandidiana. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
arrive (nitranga in-1) : com/NsYMblqE7G
— Anaky Yannick (@YannickAnaky) November 16, 2013 Vita, naharombaka ny fahatafitàny i Côte d'Ivoire taorian'ny lalao mampitaintaina 90 minitra, hizotra ho any Brezila ny Elefanta Brésil on arrive #Team225 pic. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Dominique (nitranga in-1) : Mbola misy rahateo ny tarika Médicis izay ahitana an'i Coco izay renin-janany, Petit eo amin'ny amponga lava ary Dominique amin'ny fitendrena ny angorodao. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
tompondakan' (nitranga in-4) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
hampahafantatra (nitranga in-1) : GVMeetup Nov 2013 avy amin'i Tarek Amr
Taorian'ny fampahafantarana fohifohy, nangataka tamin'ireo mpandray anjara izahay mba hampahafantatra ny tenany. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Naomy (nitranga in-1) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
· vakio ato ny lahatsoratra nadika  [en] · hevitra (0) Zarao:  facebook · twitter · googleplus · reddit · StumbleUpon · delicious. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
gens (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
nampiasa (nitranga in-3) : Ny tao Toamasina I dia voalaza tamin'ny didim-pitsarana navoakan'ny Ces fa nampiasa fitaovam-panjakana, an'ny fahitalavi-pirenena nanaovana fampielezan-kevitra ny minisitry ny Vola sy ny tetibola teo aloha. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
môtô (nitranga in-2) : Nodonin'ny fiara avy aty aoriana ny môtô nentin'izy mivady. (Sombiny)
nahahetsika (nitranga in-1) : Tsy nahatsiaro hafanana anefa izy fa taitra tampoka fotsiny ka tsy nahahetsika sady tsy nahateny, araka ny voalazany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
niantsoany (nitranga in-1) : Hafaliana indrindra ho ahy ny niantsoany ahy “maman”, hoy hatrany ny reniny. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
anatiny (nitranga in-2) : Tato ho ato, saika ny faritra rehetra eto Antananarivo, hatrany amin'ireo tanàna manodi­dina no miaina anatiny haizina. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Nampahafantatra (nitranga in-1) : Nampahafantatra vetivety momba ny Creative Commons sy ireo karazana fahazoan-dalana azo isafidianana i Mohamed Adel avy eo. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Mahboul (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
nanaovana (nitranga in-2) : Fampiasana fitaovam-panjakana sy fahefam-panjakana noentina nanaovana fampielezan-kevitra no tena niampangana an'i Hery Rajaonarimampianina. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Inestables (nitranga in-2) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
Mitohy hatrany ireo andianà atrikasa isa-kerinandro ao amin'ny Hopitaly fitsaboana aretin-kozatra aman-tsaina “neuro-psychiatrique” ao Córdoba, Arzantina izay karakarain'ny Tetikasa Radio Los Inestables vatsian'ny Rising Voices vola. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
vibré (nitranga in-1) : Tao anaty fahagagana no nandresen'i Frantsa 3-0 tamin'ny lalao miverina, nitraka horakora-pifaliana tamin'ny mpanohana an'i Frantsa sy fahadisoam-panantenana teo amin'ny mpanohana Okrainiana:
Ce soir, le Stade de France a vibré. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
encuentran (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Tézapsidis (nitranga in-1) : ***Léonidas Tézapsidis (masoivohon'ny Vondrona Eoropeanina) : « Fotoana ahafahana manarina ireo lesoka rehetra nitoetra tamin'ny fifidi- anana Filoham-pirenena fihodinana voalohany izao. (HOY RY ’ZALAHY)
noforonina (nitranga in-1) : Fombafomba fotsiny ihany izany ilay mitory sy mitaraina ve, sa mety noforonina ihany koa ve ireo porofo nanohanana an'izany fitoriana sy fitarainana voarain-dry zareo teny Ambohidahy izany. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Phikippe (nitranga in-1) : «Nisy naman'i Médics mirahalahy, Phikippe Imbert sy Pierre Cassé efa nanolotra angorodao ho azy», hoy ihany i Coco. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
atoandro (nitranga in-1) : Nanohy niresaka hatrany izahay nandritra ny sakafo maraina sy ny sakafo atoandro. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
notafihy (nitranga in-1) : Tokantrano roa samy mpivarotra sy mpanangom-bokatra avokoa no notafihin'ireo jiolahy, voalaza fa manodidina ny 15 isa teo. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
distrika (nitranga in-1) : Nolavin'ity Fitsarana ity araka izany ny vato azon'ny kandidàn' ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara tamina distrika efatra. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Djazairy (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
Médicis (nitranga in-8) : namela sanganasa maro i Medicis (mitrotro zaza)
Telo taona taorian'ny nahafatesany, dia misy mampiasa nefa tsy miera amin'ny mpandova azy, ireo sanganasan'i Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
hotanterahina (nitranga in-1) : HERY RAJAONARIMAMPIANINA- «Vonona hanohy ny tolona tamin'ny 2009 aho»
Nilaza ny fahavononany hijoro hitondra ny faneva sy hanohy ny tolona nimatimatesan' ny Filohan'ny tetezamita, Andry Rajoelina hatramin' ny taona 2009 ny kandidà Hery Rajaonarimampianina izay isan'ireo hiatrika ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa hotanterahina ny 20 desambra izao. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
nampiantrano (nitranga in-1) : Ny ambiny kosa tafatsoaka tany anaty ala ka nampanano sarotra ny fanenjehana
Filoham-pokontany iray voatondro ho nampiantrano an'ireo jiolahy nandritra ny tapa-bolana ihany koa no nosamborin'ny zandary niaraka tamina vehivavy iray hafa. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
October (nitranga in-1) : com/d5MSIhFEjv
— Paulin Diasivi (@paulindias) October 14, 2013 Nandritra ny lalao nifanandrinan'i Burkina sy Alzeria, siokam-panavakavaham-bolonkoditra nataon'ny mpanohana Alzeriana Côte d'Ivoire vs. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Algérie (nitranga in-1) : ity :
Nangina (nitranga in-1) : Nangina tsy niaka-pofona ireo kandidà tsy tafakatra fihodinana faharoa, na dia nisy aza ireo noheverina hanangam-bovona, vantany vao nivoaka iny didin'ny Ces omaly iny. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
nanaovan' (nitranga in-1) : Teo ihany koa ny tao Mahambo izay voalaza fa nanaovan' ny Lehiben'ny faritra fanambarana mivantana mihitsy mba hifidianana an'ity kandidà ity. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Olga (nitranga in-1) : Tsy ny hazan-dranomasina rehetra anefa no tsy azo hohanina, fa ireo nihinana poizina ihany ” hoy ny fanambarana nataon'ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Olga Ramaroson. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
hisolo (nitranga in-2) : Sehatra iray hahafanan'ny iray amin'izy ireo hisolo tena ny Malagasy amin'ny fiadiana ny amboaran'
i Afrika (CAF) ity lalao ity. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
tanànan' (nitranga in-1) : ny 20 novambra teo no nitrngan'ilay fanafihana tany amin'ny faritra Vatomandry
Mpivarotra sady mpanangom-bokatra iray no namoy ny ainy vokatry ny fanafihan-jiolahy niseho tao amin'ny tanànan'Ambalabe, distrikan'i Vatomandry ny 20 novambra teo tamin'ny 8 ora 30 alina. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
American (nitranga in-1) : com/gxirTLir8v
— American Fútbol (@futbolmovie) November 19, 2013 Sarin'i Rueter izay namoaka azy teo anilan'ireo mpanohana Okraina nidona tamin'ny volamena Mpanoratra Rakotomalala · Nandika Jentilisa
Adel (nitranga in-2) : Mohamed El-Gohary, Mohamed Adel ary ny tenako no nandrindra ny hetsika. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
niampangana (nitranga in-1) : Fampiasana fitaovam-panjakana sy fahefam-panjakana noentina nanaovana fampielezan-kevitra no tena niampangana an'i Hery Rajaonarimampianina. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
distrikany (nitranga in-1) : Mpandray anjara iray hafa kosa liana tamin'ny Rising Voices, ary te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fandehan'ny fomba fidirana ho mpikambana satria manana hevitra amin'ny sehatry ny aterineto izy mba hanampiana ny olona ao amin'ny distrikany hiresaka momba ny tsy fisian'ny sampan-draharaham-panjakana ao amin'ny faritra misy azy ireo. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Achille (nitranga in-6) : Tapa-taona izao no nahalalan'ny fianakavian'i Achille, zazalahy telo taona sy tapany, fa manana ny toe-tena “autiste” izy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
hotontosaina (nitranga in-1) : Vokatra nahafahan'izy ireo hiatrika ny lalao famaranana hotontosaina anio izany fandresena miezinezina izany. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
nokapay (nitranga in-1) : Raha vao nianjera dia nokapain'ireo jiolahy tamin' ny antsy ilay raim-pianakaviana. (Sombiny)
noheverina (nitranga in-1) : Nangina tsy niaka-pofona ireo kandidà tsy tafakatra fihodinana faharoa, na dia nisy aza ireo noheverina hanangam-bovona, vantany vao nivoaka iny didin'ny Ces omaly iny. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
nampanantsoina (nitranga in-1) : Voalaza fa fanodinkodinam- bolam-panjakana no nampanantsoina azy. (Tapatapany)
sanganasan' (nitranga in-2) : namela sanganasa maro i Medicis (mitrotro zaza)
mariboninahitry (nitranga in-1) : Notoloran'ny minisiteran'ny vakoka sy ny kolontsaina ny mariboninahitry ny zavakanto sy ny asa soratra ary ny kolontsaina i Sylvain Subervie, mpanakanto eo amin'ny asa vy sy ny asa vato ary ny fanaingoana. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
nandrisika (nitranga in-1) : GVMeetup tao Kairo
Nofarananay tamin'ny fizarana ny fomba fifandraisana aminay ny fihaonana ary nandrisika ireo mpanatrika izahay mba hifandray aminay hatrany raha mila soso-kevitra mikasika ny tetikasany manokana na hanavetin-daharana ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Ambovombe (nitranga in-1) : Fanerena mpiasam-panjakana, ny mpampianatra sy mpianatra hiatrika ny fampielezan-kevitr'ity kandidà ity, ny 22 oktobra kosa no nanafoanana an'ireo ampaham-bokatra tany Ambovombe Androy. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
GVMeetup (nitranga in-2) : GVMeetup Nov 2013 avy amin'i Tarek Amr
participantes (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
filma (nitranga in-1) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
namonjy (nitranga in-2) : Folo minitra taorian'ny antso dia tonga namonjy ny zandary avy ao amin'ny zana-tobim-paritra Itaosy. (Sombiny)
toromarika (nitranga in-1) : Nivoitra teny Ambohidahy ny fisian'ny fitanana an-tsoratra ara-dalàna, eny hatramin'ny tsy fahaizana manao kajy ka nisian'ny toromarika niolaka ny amin'ny tokony hampiasàna milina fikajiana amin'ny manaraka. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
fohifohy (nitranga in-1) : GVMeetup Nov 2013 avy amin'i Tarek Amr
Andrianjanaka (nitranga in-1) : Naka Andrianjanaka. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
hahatafitany (nitranga in-1) : Okraina
Frantsa no tanaty hantsana lalina indrindra hanihina mba hahatafitany taorian'ny fahareseny 2-0 nanoloana an'i Okraina tamin'ny lalao mandroso. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Atsimon­drano (nitranga in-1) : Teo amin'ny telo segaondra teo fotsiny ny faharetan'izany ary dia tsy hita izay nalehany avy eo », araka ny nambaran'i Hery Fanante­nana Mendrika Romina, 18 taona miasa amina fianakaviana iray eny Atsimon­drano eny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
fanambaràna (nitranga in-1) : Miankina amin'ny fanapahan-kevitr'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny Malagasy miara- miainga izany hoe mety ho fanohanana kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena izany», hoy i Hajo Andrianainarivelo omaly taorian'ny fanambaràna ny voka-pifidianana ofisialy nataon' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) tetsy Ambohidahy. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Antsirabe (nitranga in-1) : Hitondra ny «Tsikafona» anio manomboka amin'ny 3 ora ireo mpikambana ao amin'ny Faribolan'ny Poeta sy Mpanoratra Sandratra avy any Antsirabe. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
horaisy (nitranga in-1) : Ny iraka sy ny andraikitra horaisin'ny Vondrona Eoropeanina dia hitohy hatrany amin'ny fiafaran'ny fifidianana. (HOY RY ’ZALAHY)
mihinana (nitranga in-1) : Fadiana indrindra ny mihinana atsantsa, geba, “sardine”, “sardinelle”, soka-dranomasina amin'izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
fiatrehana (nitranga in-1) : «Ny fiatrehana ny fifidi- anana solombavambahoaka aloha izao no laharam-paha- mehana. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
nanoratra (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
nitselatselatra (nitranga in-1) : Tsy nahitana faritra may koa anefa io fitaovana io
« Raha variana nijery fahitalavitra iny aho, ny andro avy orana sady nitselatselatra be, no nisy vain' afo nipoaka be teo afovoan-trano, niditra teo amin'ny varavarana mampitohy ny trano sy ny lavarangana. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
tombanan' (nitranga in-1) : Azo heverina ho adin'ny mpanazatra ny fihaonan' ny roa tonta, izay tombanan' ny rehetra fa hiady anarana izy mirahalahy samy Auguste (Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa). (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
fihinana (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
mitàna (nitranga in-1) : Ankehitriny, afaka mitàna anjara toerana lehibebe kokoa amin'ny famokarana votoatim-peo ireo mpandray anjara, sy ny fikirakirana ny fitaovana fampiasa amin'ny radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
andrarezy (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Médics (nitranga in-1) : «Nisy naman'i Médics mirahalahy, Phikippe Imbert sy Pierre Cassé efa nanolotra angorodao ho azy», hoy ihany i Coco. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Befo­rona (nitranga in-1) : Nahazo antso ny zandary avy ao amin'ny vondron-tobim-paritra Moramanga ka nandefa zandary sy nampilaza ny tao amin'ny zana-tobim-paritra Befo­rona. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Okraina (nitranga in-4) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Pitsopitsony (nitranga in-1) : Pitsopitsony kely no niova. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Nisantaran' (nitranga in-1) : Nisantaran'izy ireo izany ny «Nofy-Tiako» an'i Rima teto Antananarivo ny volana septambra, «Nizahatany» kosa tany Toamasina ny 16 novambra teo…
FR. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
hihaona (nitranga in-1) : R A
St Denis Olympique no hihaona amin'ny Stef'Auto anio. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
nalefa (nitranga in-1) : Naratra mafy ary nalefa notsaboina tany amin'ny hopitalin'i Tsiroano­mandidy kosa ny vadiny. (Sombiny)
monde (nitranga in-1) : Fa mbola heniky ny rehareham-pandresena ihany i Yaoundé, renivohitra ara-toekaren'i Kamerona, taorian'ny fandresena:
Le Cameroun vas en coupe du monde >>>> pic. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
tale (nitranga in-1) : hITOKONA
Mivonona hiroso amin'ny fitokonana amin'ny alatsinainy izao ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny Tahirim-bolam-panjakana noho ny fiantsoan'ny zandary eny Fiadanana ny tale jeneralin'ny Tahirim-bolam-panjakana. (Tapatapany)
noraisina (nitranga in-2) : Saingy na tsy azo raisina, na noraisina ihany nefa tsy mitombina hono izy ireny, araka ny vaky teny nifandimbiasan'ireo mpitsara ao anatin'ity fitsarana izany. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Denis (nitranga in-2) : Ny ekipan'ny Saint Denis Olympique, tompondaka farany nandresy ny Stef'Auto tamin'ny taona 2012, no hifanandrina indray amin'izy ireo eo amin'ny famaranana anio. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
nanohanana (nitranga in-1) : Fombafomba fotsiny ihany izany ilay mitory sy mitaraina ve, sa mety noforonina ihany koa ve ireo porofo nanohanana an'izany fitoriana sy fitarainana voarain-dry zareo teny Ambohidahy izany. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
hagagàna (nitranga in-1) : Hatairana sy hagagàna ny an'ity tovovavy miasa amin'olona eny Andoharanofotsy raha nidiran'ny varatra tao an-tokan­trano, ny talata teo tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, tamin'ny fotoana nisian' ny orambe iny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
fahavononany (nitranga in-2) : Omaly dia samy nanaiky ny didim-pitsarana navoakan'ny Ces ny roa tonta ary naneho ny fahavononany tanteraka hifaninana amin'io fifidianana io. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
Ambohidahy (nitranga in-9) : Miankina amin'ny fanapahan-kevitr'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny Malagasy miara- miainga izany hoe mety ho fanohanana kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena izany», hoy i Hajo Andrianainarivelo omaly taorian'ny fanambaràna ny voka-pifidianana ofisialy nataon' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) tetsy Ambohidahy. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Zafisoa (nitranga in-1) : Voatery nahena ny entana”, hoy i Zafisoa Mahery Ny Aina, mpivarotra hazan-dranomasina etsy Ankadilalana. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
nidiran' (nitranga in-1) : Hatairana sy hagagàna ny an'ity tovovavy miasa amin'olona eny Andoharanofotsy raha nidiran'ny varatra tao an-tokan­trano, ny talata teo tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, tamin'ny fotoana nisian' ny orambe iny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
maorisiana (nitranga in-1) : Mpanazatra maorisiana, seiseloa, kaomoriana ary avy any Rodrigues no mandray anjara hatramin'ny 6 desambra ho avy izao. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
fiana­kavian' (nitranga in-1) : Mpiara-monina nahita
Raha ny voalaza dia izy irery tamin'io fotoana io no nijery fahitalavitra tao amin' ny efitrano fandraisam-bahiny, saingy nanamafy ny fahitana izany pitik'afo nentin'ilay varatra izany kosa ny tovovavy iray fiana­kavian'ny tompon-trano tao amin'ny efitra an'ila. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
am­bony (nitranga in-1) : Mbola nilaza ho nahita izany hazavana be nitaratra nihodinkondina nandritra ny fotoana vitsy avy tao am­bony rihana izany ihany koa anefa ireo fianakaviana hafa monina ao ambany rihana tamin'io fotoana io, ary nihiaka mafy sy nian­tsoantso raha nahatazana izany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
atsikafona (nitranga in-1) : Ny inona no mitsikafona sa ny inona no atsikafona. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
Nahena (nitranga in-1) : Nahena mihitsy ny fanafarana entana ho an'ny mpivarotra sasany. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Ankasina (nitranga in-2) : Tsy hionona amin'izao kosa ny Cosfa sy ny TFM Ankasina na dia efa tany amin'ny lalao sakana aza vao tafita hiatrika io dingan' ny manasa-dalana io. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Pendant (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
avo­koa (nitranga in-1) : Teny faneva nosafidin'izy ireo ny hoe « Havan'ny olona rehetra sy mpirahalahy daholo ny Tily », noho izany dia tsy anavahana finoana fa rehefa Tily dia hiara-hankalaza ny faha-90 taona niorenany avo­koa ny 30 novambra ho avy izao. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Natao (nitranga in-1) : Natao fitiliana haifanitsiampiteny indray izy, teo no noeritreretina ny mety ho maha “autiste” azy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
equipamiento (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
2014 (nitranga in-2) : Ny vinavina hita ankehitriny dia any amin'ny taona 2014 vao mety tena hirotsaka izany ary any amin'ny volana febroary any ho any kosa vao mety hisy ireo tondra-drano », hoy i Hubert Andriamparison, mpamantatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrianomby. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
2010 (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
2013 (nitranga in-15) : Roméo Andriamihaja
Fandaharam-potoana Sabotsy 23 novambra 2013 Vehivavy TOP 6 9 ora: CPI # OCA 11 ora: Mata # Rosa Junior manasa-dalana 1 ora: JCA # US Ikopa 3 ora: FTM # USA Alahady 24 novambra 2013 Vehivavy Top 8 9 ora: 3FB # UASC 11 ora: SCB # FTFA Top 14 manasa-dalana 1 ora: COSFA # IRC 3 ora: 3FB # TFMA Samy hiatrika ny manasa-dalana fa tsy hifandona anio ny Cosfa sy 3FB. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
2012 (nitranga in-1) : Ny ekipan'ny Saint Denis Olympique, tompondaka farany nandresy ny Stef'Auto tamin'ny taona 2012, no hifanandrina indray amin'izy ireo eo amin'ny famaranana anio. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Porto (nitranga in-1) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Alefanay (nitranga in-1) : Alefanay sioka mivantana amin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #GVMeetup ny resaky ny tsirairay mba hizarana ny rohy misy ny tetikasa, bilaogy ary ny fialam-bolin'ireo mpandray anjara. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nangataka (nitranga in-2) : GVMeetup Nov 2013 avy amin'i Tarek Amr
Auguste (nitranga in-3) : Azo heverina ho adin'ny mpanazatra ny fihaonan' ny roa tonta, izay tombanan' ny rehetra fa hiady anarana izy mirahalahy samy Auguste (Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa). (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
maninjitra (nitranga in-1) : « Maha­vita mivelona herinandro maninjitra any anaty ala ny tenako ankehitriny. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
afo­voany (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
twitt (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
Nilaza (nitranga in-1) : HERY RAJAONARIMAMPIANINA- «Vonona hanohy ny tolona tamin'ny 2009 aho»
Miamy (nitranga in-1) : Efa nentiny tany Miami Etazonia ireo asa tanany ireo. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Yaoundé (nitranga in-1) : Fa mbola heniky ny rehareham-pandresena ihany i Yaoundé, renivohitra ara-toekaren'i Kamerona, taorian'ny fandresena:
vitany (nitranga in-1) : 100 ny vitany tany am-boalohany, feno 200 amin'ity taona ity ary ezahiny ny hahavita ireo miaramilan'ny fandriampahalemana 1000 ireo. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
azon' (nitranga in-2) : Nolavin'ity Fitsarana ity araka izany ny vato azon'ny kandidàn' ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara tamina distrika efatra. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
nosamborina (nitranga in-1) : Omaly maraina dia nahatratra 13 ireo olona ahiana ho nanana andraikitra tamin'ity fanafihana ity no nosamborina ka isan'izany ilay filoham-pokontany. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
hametrahana (nitranga in-1) : Na dia averimberina matetika aza fa lalao fotsiny ihany ireny lalao ireny, ny fihetsika ataon'ny olona aloha sy aorian'ny lalao sasany no maneho fa misy zavatra hafa kokoa tian'ny rehetra hametrahana azy ireny. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Fombafomba (nitranga in-1) : Fombafomba fotsiny ihany izany ilay mitory sy mitaraina ve, sa mety noforonina ihany koa ve ireo porofo nanohanana an'izany fitoriana sy fitarainana voarain-dry zareo teny Ambohidahy izany. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
professionnelle (nitranga in-1) : Mpianatra miisa 61 nisalotra ny anarana « Masoandro » no notolorana ny mari-pahaizana « licence professionnelle » sy « Master » nandritra ny fotoana. (Tapatapany)
nitondrana (nitranga in-1) : ***Renim-pianakaviana maty tamin'ny môtô> Namoy ny ainy taoriana kelin'ny nitondrana azy teny amin'ny hôpitaly ny renim-pianakaviana iray noho ny loza-pifamoi­voizana nahazo azy ny 21 novambra teo tamin' ny 6 ora maraina, tany amin'ny fokontanin' Andranomadio, kaominina ambanivohitr'i Fihao­nana. (Sombiny)
nihinana (nitranga in-3) : Nanazava tamin'ireo namany ny antony nahafaty ireo nihinana hazan-dranomasina tany Fenoarivo Atsinanana kosa i Nantenaina no nifanena taminay, zary raiki-tahotra amin'ny fihinanana trondron-dranomasina izy amin'izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
hanohana (nitranga in-2) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
nahavita (nitranga in-1) : Senegal
Tafiditra tao amin'ny lalao an-tsehatra ihany koa i Côte d'Ivoire rehefa nahavita nanakenda an'i Senegal tany Dakar 1-1 mba hahatafita azy. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Rosa (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
hanampiana (nitranga in-1) : Mpandray anjara iray hafa kosa liana tamin'ny Rising Voices, ary te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fandehan'ny fomba fidirana ho mpikambana satria manana hevitra amin'ny sehatry ny aterineto izy mba hanampiana ny olona ao amin'ny distrikany hiresaka momba ny tsy fisian'ny sampan-draharaham-panjakana ao amin'ny faritra misy azy ireo. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
685% (nitranga in-1) : Ankilan'izay rehetra izay anefa dia tsy niolaka mihitsy ny kandidà Camille Vital izay nahazo isam-bato 6,85% omaly raha nilaza fa «tsy misy maharesy lahatra ahy mihitsy ireo kandidà roa hiatrika an'io fifidianana fihodinana faharoa io ». (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
hanovàna (nitranga in-1) : Mpandray anjara roa hafa, mpanao gazety mpanao famotorana sy mpianatra lalàna nahita marimaritra iraisana tamin'ny firesahana ny tokony hanovàna ny lalàna mikasika ny fahalalahana hahazo vaovao ao Ejypta mba hanatontosan'ireo mpanao gazety tsara ny asany. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
notsi­notsinoavina (nitranga in-1) : miroso amin'ny fana­foanana ny aretina notsi­notsinoavina. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
fahapozinana (nitranga in-1) : maro amin'ireo mpanjifa no matahotra ny fahapozinana avy amin'ny trondro
Mihorohoro fanapoizi­nana. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
nitondra (nitranga in-3) : Efa nitondra ny ekipan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny taon-dasa i Raux Auguste, izay mitantana indray ny ekipan'ny masindahy Misely amin'izao fotoana. (Sombiny)
voalazany (nitranga in-1) : Tsy nahatsiaro hafanana anefa izy fa taitra tampoka fotsiny ka tsy nahahetsika sady tsy nahateny, araka ny voalazany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Achile (nitranga in-1) : raveloarinosy Mbolatiana renin'i Achile
Toe-tena tsy misy mpahalala firy, hoenti-miaina mandra-maty. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
tanaty (nitranga in-1) : Okraina
Vacoas (nitranga in-1) : Hisokatra anio ao Vacoas ny fampianarana tarihin'i André Glaive, manam-pahaizana frantsay iraka manokan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
irony (nitranga in-2) : Tsy fahatapahana maharitra anefa, fa irony tapaka kely, anefa misesi­sesy irony. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
fizaràna (nitranga in-1) : « Ao anatin' ny dimy taona raha kely indrindra ny fizaràna fanafody. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
fiovaovan' (nitranga in-1) : Ny faritra Antananarivo ihany no iharan'izao fiovaovan'ny toetry ny andro izao, fa ny any amin'ireo faritra sasany toy ny any Atsimo, Andrefana, Menabe ary Atsinanana kosa dia mizotra ara-dalàna tsara ny vanim-potoana fahavaratra. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
Curepipe (nitranga in-2) : Niondrika tao amin' ny taniny tamin'ny seta 3 no ho 0 (25/18, 25/20, 25/14) ny Curepipe Starlight avy ao Maorisy nanoloana ny ekipa tompondakan'i Madagasikara. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Azonao (nitranga in-1) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Junior (nitranga in-2) : Hanomboka amin'ny fifaninanana eo amin'ny sokajy vehivavy Top 6 izany, arahin'ny sokajy Junior anio. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
nitohy (nitranga in-2) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Algerie (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
dian' (nitranga in-1) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
tenany (nitranga in-3) : Ny tao Fenoarivo Atsinanana indray dia voalaza fa nampiasa fiara tsy mataho-dalana an'ny faritra ny tenany, ankoatra ny fivoriana nampiasana fahefam-panjakana ny 15 oktobra. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
disfrutado (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
bila­riziozy (nitranga in-1) : Fidiran'ny zana-kankana amin'ny mason-koditra kosa no miteraka ny bila­riziozy, ary miseho amin' ny alalan'ny rà rehefa mivoaka. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
dingan' (nitranga in-3) : hifandimby eny amin'ny kianja Makis ireo dingan' ny manasa-dalana ho an' ny fifaninanan' Analamanga ho an'ny baolina lavalava amin'ny faran'ity herinandro ity. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Notifiry (nitranga in-1) : ***Voatifitra teny ambony môtô> Notifirin'ny jiolahy tamin'ny basy teny ambony môtô ireto lehilahy mpianaka avy namonjy tsena tany Ambalanirana, fokontanin' Ankianja­mandroso,ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 6 ora hariva. (Sombiny)
nahita (nitranga in-3) : Mpiara-monina nahita
Raha ny voalaza dia izy irery tamin'io fotoana io no nijery fahitalavitra tao amin' ny efitrano fandraisam-bahiny, saingy nanamafy ny fahitana izany pitik'afo nentin'ilay varatra izany kosa ny tovovavy iray fiana­kavian'ny tompon-trano tao amin'ny efitra an'ila. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Juliano (nitranga in-1) : Juliano Randrianja. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
hanazava (nitranga in-1) : Mpanakanto mpanoratra maromaro ary avy an-drenivohitr'i Vakinan­karatra no hiakatra ny sehatra ka hiezaka ny hanazava sy haneho amin'ny zavakanto ny «Tsikafona». (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
Photo (nitranga in-1) : ity :
tanàna (nitranga in-3) : tsy tanàna vitsivitsy intsony no mitaraina noho ny fahatapahan'ny herinaratra. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Noeritreretina (nitranga in-1) : Noeritreretina ho manana olana ara-pahenoana izy, ka nodidiana ny sofiny. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Tarek (nitranga in-2) : GVMeetup Nov 2013 avy amin'i Tarek Amr
nosambory (nitranga in-1) : Ny ambiny kosa tafatsoaka tany anaty ala ka nampanano sarotra ny fanenjehana
Senegal (nitranga in-3) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
qualification (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
1000 (nitranga in-2) : Anisan'ireo sangansany nisongadina ireo miaramila mpiandry miisa 1000 izay hiarahan'ny vy sy ny vato madio. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Carpio (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Creative (nitranga in-2) : Notsipihanay fa ny lahatsoratra GV rehetra dia avoaka amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana Creative Commons. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nisehoana (nitranga in-1) : Voalaza fa tsy voalohany no nisehoana tranga toy izao ity tovovavy ity. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
suspens (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
delicious (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Amparibe (nitranga in-1) : « Ho fanamarihana io andro malaza io dia hikarakara diabe ny fikambanana hiainga eny Anosy, Amparibe ary Antanimbarinandriana ka hihazo ny lapan'ny Kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina, toerana hanaovana ny lanonana sy ny fiderana miaraka. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
lohalaharana (nitranga in-1) : Nisy tao amin'ny lohalaharana no lasa miandry vodilaharana. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
Tratran' (nitranga in-1) : Tratran'ny fintaintainan'ny Mondialy ny tangoron'olona tao Algers, araka ity sary hita ao amin'ny kaonty Twitter an'ny mpisera Bilel. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Fihao­nana (nitranga in-1) : ***Renim-pianakaviana maty tamin'ny môtô> Namoy ny ainy taoriana kelin'ny nitondrana azy teny amin'ny hôpitaly ny renim-pianakaviana iray noho ny loza-pifamoi­voizana nahazo azy ny 21 novambra teo tamin' ny 6 ora maraina, tany amin'ny fokontanin' Andranomadio, kaominina ambanivohitr'i Fihao­nana. (Sombiny)
tato (nitranga in-1) : “Tsy latsaky ny 150 ny olona tonga nividy trondron-dranomasina tato aminay teo aloha. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
hifanandrina (nitranga in-1) : Ny ekipan'ny Saint Denis Olympique, tompondaka farany nandresy ny Stef'Auto tamin'ny taona 2012, no hifanandrina indray amin'izy ireo eo amin'ny famaranana anio. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
sehatry (nitranga in-2) : Tafiditra amin'ny fikolokoloana an'i Vavara Médicis eo amin'ny sehatry ny mozika ny fanohizan'izy ireo ny tarika. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
fikisaky (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Raux (nitranga in-3) : Azo heverina ho adin'ny mpanazatra ny fihaonan' ny roa tonta, izay tombanan' ny rehetra fa hiady anarana izy mirahalahy samy Auguste (Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa). (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
Brésil (nitranga in-3) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
taty (nitranga in-1) : Voahaja ny lojika teo amin'ity manasa-dalana ity satria sambany no tonga teo amin'ny manasa-dalana ny Curepipe Starlight, raha efa voahosotra ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana (2011) kosa ny Stef'Auto ary efa zatra lalao iraisam-pirenena taty amin'ny faritra fahafito. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
vitako (nitranga in-1) : Sedra iray tsy nampoiziko ho vitako nandritra ny fiainako. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
hanoratany (nitranga in-1) : me, izay hanoratany momba ny fampiasana sary ho entina hanovana ny fitondra-tenan'ny olona. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
zanany (nitranga in-3) : «Efa mipetraka eo anivon'ny ofisy malagasy miaro ny zon'ny mpamorona io maha mpandova ny zanany io ary izahay no efa nandray ny zon'ny mpamorona tamin'ny anaran'i Médicis efa ho roa taona izao», hoy ihany izy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
anjakan' (nitranga in-1) : Toa tsy misy akory izay mba faritra heverina fa milamindamina fa dia anjakan'ireo izay manana basy «Kalachnikov» na farafaharatsiny basy poleta. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
handamina (nitranga in-1) : Sao mba natao handamina «raharaha anatiny» kosa ary ireo Lehiben'ny faritra miaramila. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
nifandimbiasan' (nitranga in-1) : Saingy na tsy azo raisina, na noraisina ihany nefa tsy mitombina hono izy ireny, araka ny vaky teny nifandimbiasan'ireo mpitsara ao anatin'ity fitsarana izany. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Rajaonarimampianina (nitranga in-8) : Ity farany izay nahazo ny isam-bato 10, 54% taorianan'ny kandidà Hery Rajaonarimampianina. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
heverinay (nitranga in-1) : “Eo am-piketrehana ny rakikira vaovao izahay amin'izao fotoana, izay heverinay hatolotra ny mpankafy amin'ny taona 2014”, hoy ny tarika. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
programas (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
fifanintsanana (nitranga in-1) : Eo amin'ity farany dia hiaro ny voninahiny, tafita avy hatrany teo amin'ny dingan' ny fifanintsanana, ny Iarivo Rugby Club sy ny 3FB. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Rasolomalala (nitranga in-1) : Rasolomalala Ihony. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
ananan' (nitranga in-1) : Raha ny fantatra dia ananan'olona trosa be miavosa ity mpivaro-kena ity. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
elita (nitranga in-1) : Rahampitso kosa dia ny sokajy vehivavy Top 8 no hanomboka izany arahin' ny sokajy diviziona 1 elita 1 na ny «Top 14». (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Omer (nitranga in-1) : ***Praiminisitra Omer Beriziky : « Dingana lehibe no vita ary vonona ny handray ny andraikiny hanao izay fomba rehetra hahatanterahan'ny fihodinana faharoa amin'ny Fifidianana Filoham-pirenena ny fitondram-panjakana. (HOY RY ’ZALAHY)
bebe (nitranga in-1) : Mpandray anjara iray hafa kosa liana tamin'ny Rising Voices, ary te-hahafantatra bebe kokoa momba ny fandehan'ny fomba fidirana ho mpikambana satria manana hevitra amin'ny sehatry ny aterineto izy mba hanampiana ny olona ao amin'ny distrikany hiresaka momba ny tsy fisian'ny sampan-draharaham-panjakana ao amin'ny faritra misy azy ireo. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nifanaovanay (nitranga in-1) : Nandritra ny resadresaka nifanaovanay, niadi-hevitra momba ny maha-zava-dehibe ny lalàna “copyleft” izahay. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Nivoitra (nitranga in-1) : Nivoitra teny Ambohidahy ny fisian'ny fitanana an-tsoratra ara-dalàna, eny hatramin'ny tsy fahaizana manao kajy ka nisian'ny toromarika niolaka ny amin'ny tokony hampiasàna milina fikajiana amin'ny manaraka. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
nihatrana (nitranga in-1) : Efa nihatrana anefa ny mpitandro ny fila­minana. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Antana­narivo (nitranga in-1) : Tsy ny eto Antana­narivo ihany anefa no ahitana fihenana ny fanjifana trondron-dranomasina, fa hatrany amin'ireo faritra nahitana fahafatesana nateraky ny fahapoizinana, toa an'Antsiranana. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Hubert (nitranga in-1) : Ny vinavina hita ankehitriny dia any amin'ny taona 2014 vao mety tena hirotsaka izany ary any amin'ny volana febroary any ho any kosa vao mety hisy ireo tondra-drano », hoy i Hubert Andriamparison, mpamantatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrianomby. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
Fadiana (nitranga in-1) : Fadiana indrindra ny mihinana atsantsa, geba, “sardine”, “sardinelle”, soka-dranomasina amin'izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
bilaoginy (nitranga in-1) : Nianatra fanaovan-tsary ara-indostrialy ny iray tamin'ireo mpandray anjara, ary nampiseho anay ny bilaoginy, Selouk. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Andrianarisoa (nitranga in-1) : Tsy hijanona amin'ireo faritra ireo ihany fa haparitaka manerana ny Nosy», hoy ny Dr Andrianarisoa Hermes, mpitsabo eo anivon'ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (Oms). (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
esta (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
tenako (nitranga in-3) : Manao antso avo amin'ny Malagasy rehetra ny tenako mba havitrika kokoa handray anjara feno amin'io fifidianana io. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
taorianan' (nitranga in-1) : Ity farany izay nahazo ny isam-bato 10, 54% taorianan'ny kandidà Hery Rajaonarimampianina. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Mpivaro­tra (nitranga in-1) : Mpivaro­tra enta-madinika ity voatafika ity. (Sombiny)
nilazan' (nitranga in-1) : Taorian'ity fihaonana ity no nilazan'ny kandidàn' ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara fa nisy ny fanamafisana ny fifampitokisana teo aminy sy ny Filohan'ny tetezamita. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
nian­tsoantso (nitranga in-1) : Mbola nilaza ho nahita izany hazavana be nitaratra nihodinkondina nandritra ny fotoana vitsy avy tao am­bony rihana izany ihany koa anefa ireo fianakaviana hafa monina ao ambany rihana tamin'io fotoana io, ary nihiaka mafy sy nian­tsoantso raha nahatazana izany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Penh (nitranga in-1) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
hisalorana (nitranga in-1) : «Hiezaka izahay ny tsy handraraka ilo mby an-doha amin'ny maha solontenan'ny ekipana fokontany anay», hoy i Faneva Raholdina, mpanazatra ny TFMA feno fanantenana amin'ny hisalorana ny anaram-boninahitra eto Analamanga. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Makis (nitranga in-1) : hifandimby eny amin'ny kianja Makis ireo dingan' ny manasa-dalana ho an' ny fifaninanan' Analamanga ho an'ny baolina lavalava amin'ny faran'ity herinandro ity. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
hamelomana (nitranga in-1) : Nomarihin'izy ireo fa tsy misakana ny hamelomana ireo hiran'i Médicis izy ireo fa mitaky kosa ny fifanajana sy ny fiarovana ny zon'ny mpandova. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
para (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
notontosaina (nitranga in-1) : Tamin'ny 16 Novambra 2013 no notontosaina ny fihaonana tao Kairo, tao amin'ny ivon-toerana ”The Workshops” ao Maadi. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Club (nitranga in-1) : Eo amin'ity farany dia hiaro ny voninahiny, tafita avy hatrany teo amin'ny dingan' ny fifanintsanana, ny Iarivo Rugby Club sy ny 3FB. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
nenty (nitranga in-2) : Mpiara-monina nahita
Raha ny voalaza dia izy irery tamin'io fotoana io no nijery fahitalavitra tao amin' ny efitrano fandraisam-bahiny, saingy nanamafy ny fahitana izany pitik'afo nentin'ilay varatra izany kosa ny tovovavy iray fiana­kavian'ny tompon-trano tao amin'ny efitra an'ila. (Sombiny)
segaondra (nitranga in-1) : Teo amin'ny telo segaondra teo fotsiny ny faharetan'izany ary dia tsy hita izay nalehany avy eo », araka ny nambaran'i Hery Fanante­nana Mendrika Romina, 18 taona miasa amina fianakaviana iray eny Atsimon­drano eny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Poeta (nitranga in-1) : Hitondra ny «Tsikafona» anio manomboka amin'ny 3 ora ireo mpikambana ao amin'ny Faribolan'ny Poeta sy Mpanoratra Sandratra avy any Antsirabe. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
hijoro (nitranga in-1) : HERY RAJAONARIMAMPIANINA- «Vonona hanohy ny tolona tamin'ny 2009 aho»
Naratra (nitranga in-1) : Naratra mafy ary nalefa notsaboina tany amin'ny hopitalin'i Tsiroano­mandidy kosa ny vadiny. (Sombiny)
mikasa (nitranga in-1) : «Efa nahare feo aza izahay fa mikasa ny hamoaka rakikira amin'ireo sanganasan'i Médicis izy ireo», araka ny fanazavan'i Nicoletta Rinisoa na Coco, renin'i Vavara Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Radio (nitranga in-2) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
hizarana (nitranga in-1) : Alefanay sioka mivantana amin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #GVMeetup ny resaky ny tsirairay mba hizarana ny rohy misy ny tetikasa, bilaogy ary ny fialam-bolin'ireo mpandray anjara. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
isaky (nitranga in-1) : Ho an'ireo mpandray anjara marobe, ny lohahevitra resahana amin'ny atrikasa dia loharanom-pampidirana lohahevitra vaovao mifandraika amin'ny fandaharana mivantana efa misy isaky ny herinandro ao amin'ny radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
hamoaka (nitranga in-1) : «Efa nahare feo aza izahay fa mikasa ny hamoaka rakikira amin'ireo sanganasan'i Médicis izy ireo», araka ny fanazavan'i Nicoletta Rinisoa na Coco, renin'i Vavara Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Kianjabe (nitranga in-1) : com/WuEf9UnX6D
— Le Parisien (@le_Parisien) November 20, 2013 Androany alina, nihovotrovotra ny Kianjabe. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
redes (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Rugby (nitranga in-1) : Eo amin'ity farany dia hiaro ny voninahiny, tafita avy hatrany teo amin'ny dingan' ny fifanintsanana, ny Iarivo Rugby Club sy ny 3FB. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Mita­rika (nitranga in-1) : Mita­rika fivontosana eo amin' ny tanana sy ny tongotra. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
noeritreretina (nitranga in-1) : Natao fitiliana haifanitsiampiteny indray izy, teo no noeritreretina ny mety ho maha “autiste” azy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
notsaboina (nitranga in-1) : Naratra mafy ary nalefa notsaboina tany amin'ny hopitalin'i Tsiroano­mandidy kosa ny vadiny. (Sombiny)
Rainimanonja (nitranga in-1) : Aina ity, hoy Rainimanonja. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
JEAN (nitranga in-1) : JEAN LOUIS ROBINSON-«Efa maika hanana Filoha vaovao ny Malagasy»
Nidera ny fahavitrihan'ny Malagasy nandray anjara tamin'ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voalohany ny kandidà Jean Louis Robinson. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
kaomity (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
hifidianana (nitranga in-1) : Teo ihany koa ny tao Mahambo izay voalaza fa nanaovan' ny Lehiben'ny faritra fanambarana mivantana mihitsy mba hifidianana an'ity kandidà ity. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Arzantina (nitranga in-1) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
Algers (nitranga in-1) : Tratran'ny fintaintainan'ny Mondialy ny tangoron'olona tao Algers, araka ity sary hita ao amin'ny kaonty Twitter an'ny mpisera Bilel. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Maady (nitranga in-1) : Tamin'ny 16 Novambra 2013 no notontosaina ny fihaonana tao Kairo, tao amin'ny ivon-toerana ”The Workshops” ao Maadi. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
30°C (nitranga in-1) : Mbola hanodidina ny 28°C hatrany amin'ny 30°C ny mari-pana ho hita eto an-drenivohitra. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
Rakotomalala (nitranga in-1) : com/gxirTLir8v
Voices (nitranga in-11) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
Mitohy hatrany ireo andianà atrikasa isa-kerinandro ao amin'ny Hopitaly fitsaboana aretin-kozatra aman-tsaina “neuro-psychiatrique” ao Córdoba, Arzantina izay karakarain'ny Tetikasa Radio Los Inestables vatsian'ny Rising Voices vola. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Indomptable (nitranga in-1) : com/qJNZvNVq6F
— Indomptable (@Andy_CMR) November 17, 2013 Mizotra ho any amin'ny Fiadiana https://mg. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Vavara (nitranga in-3) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Robinson (nitranga in-4) : Voafidy hiatrika izany ny kandidà Jean Louis Robinson izay nitana ny laharana voalohany tamin'ny isam-bato 21,16% sy ny kandidà Hery Rajaonarimampianina izay nahazo vato 15,85%. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Medicis (nitranga in-2) : namela sanganasa maro i Medicis (mitrotro zaza)
Rave­loma­nantsoa (nitranga in-1) : Nanolotra ny mari-boninahitra ho azy ny minisitry ny Vakoka sy ny kolontsaina, Elia Rave­loma­nantsoa. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Sarah (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
misesisesy (nitranga in-1) : Matahotra ny mety ho fahasimban'ny fitaovana ato an-tokantrano sy ao am-pivarotana izahay, satria misesisesy loatra ilay faha­tapahana», hoy i Solofo, mpivarotra iray mitaraina noho ny fahatapahan-jiro miseho amin'izao fotoana. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
notsindrony (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
fond (nitranga in-1) : ity :
hihinana (nitranga in-1) : “Mbola nihinana “merlan” izahay ny alahady teo, saingy tapa-kevitra ny tsy hihinana intsony, mandra-pilamin'ny raharaha”, hoy izy. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Misely (nitranga in-1) : Efa nitondra ny ekipan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny taon-dasa i Raux Auguste, izay mitantana indray ny ekipan'ny masindahy Misely amin'izao fotoana. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
2116% (nitranga in-1) : Voafidy hiatrika izany ny kandidà Jean Louis Robinson izay nitana ny laharana voalohany tamin'ny isam-bato 21,16% sy ny kandidà Hery Rajaonarimampianina izay nahazo vato 15,85%. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
nahafahan' (nitranga in-1) : Vokatra nahafahan'izy ireo hiatrika ny lalao famaranana hotontosaina anio izany fandresena miezinezina izany. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
ifankafantarana (nitranga in-1) : Alefanay sioka mivantana amin'ny alalan'ny teny ifankafantarana #GVMeetup ny resaky ny tsirairay mba hizarana ny rohy misy ny tetikasa, bilaogy ary ny fialam-bolin'ireo mpandray anjara. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Roland (nitranga in-2) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
nampanano (nitranga in-1) : Ny ambiny kosa tafatsoaka tany anaty ala ka nampanano sarotra ny fanenjehana
Mata (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
supporteurs (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
nahateny (nitranga in-1) : Tsy nahatsiaro hafanana anefa izy fa taitra tampoka fotsiny ka tsy nahahetsika sady tsy nahateny, araka ny voalazany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
ahafahana (nitranga in-1) : ***Léonidas Tézapsidis (masoivohon'ny Vondrona Eoropeanina) : « Fotoana ahafahana manarina ireo lesoka rehetra nitoetra tamin'ny fifidi- anana Filoham-pirenena fihodinana voalohany izao. (HOY RY ’ZALAHY)
Parisien (nitranga in-1) : com/WuEf9UnX6D
TFMA (nitranga in-2) : «Hiezaka izahay ny tsy handraraka ilo mby an-doha amin'ny maha solontenan'ny ekipana fokontany anay», hoy i Faneva Raholdina, mpanazatra ny TFMA feno fanantenana amin'ny hisalorana ny anaram-boninahitra eto Analamanga. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Noroahina (nitranga in-1) : Noroahina tany an-tsekoly
Tsy tahaka ny rehetra ny zaza “autiste”. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
hahatafita (nitranga in-1) : Senegal
rakikira (nitranga in-2) : «Efa nahare feo aza izahay fa mikasa ny hamoaka rakikira amin'ireo sanganasan'i Médicis izy ireo», araka ny fanazavan'i Nicoletta Rinisoa na Coco, renin'i Vavara Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
nihovotrovotra (nitranga in-1) : com/WuEf9UnX6D
logrado (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
hizaràna (nitranga in-1) : Zaza dimy hatramin'ny 15 taona eny an-tsekoly sy eny anivon' ny fiarahamonina no hizaràna izany. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
avouez (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
Mihinana (nitranga in-1) : Mihinana io zava-maniry io ny trondro madinika ary tafiditra ao anatiny ilay poizina. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
henjankenjana (nitranga in-1) : Ho henjankenjana ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara eo amin'ny baolina kitra rahampitso any amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
hampiasàna (nitranga in-1) : Nivoitra teny Ambohidahy ny fisian'ny fitanana an-tsoratra ara-dalàna, eny hatramin'ny tsy fahaizana manao kajy ka nisian'ny toromarika niolaka ny amin'ny tokony hampiasàna milina fikajiana amin'ny manaraka. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Louis (nitranga in-4) : Voafidy hiatrika izany ny kandidà Jean Louis Robinson izay nitana ny laharana voalohany tamin'ny isam-bato 21,16% sy ny kandidà Hery Rajaonarimampianina izay nahazo vato 15,85%. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
nifanaovan' (nitranga in-1) : Tonizia
firesahana (nitranga in-1) : Mpandray anjara roa hafa, mpanao gazety mpanao famotorana sy mpianatra lalàna nahita marimaritra iraisana tamin'ny firesahana ny tokony hanovàna ny lalàna mikasika ny fahalalahana hahazo vaovao ao Ejypta mba hanatontosan'ireo mpanao gazety tsara ny asany. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
kalachnikov (nitranga in-1) : ***Mpivarotra enta-madinika voatafika> Vola mitentina Ar 1 500 000 no norobain'ny jiolahy miisa 10, nitondra basy kalachnikov telo tany amin'ny fokontanin'Ampasika, kaominina ambanivohitra Itaosy ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 8 ora alina. (Sombiny)
arrache (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
sokajiana (nitranga in-1) : Hozaraina fanafody misoroka amin'ireto aretina sokajiana ho notsi­notsi­noavina ireto ireo faritra dimy ireo. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
ofisy (nitranga in-1) : «Efa mipetraka eo anivon'ny ofisy malagasy miaro ny zon'ny mpamorona io maha mpandova ny zanany io ary izahay no efa nandray ny zon'ny mpamorona tamin'ny anaran'i Médicis efa ho roa taona izao», hoy ihany izy. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
handrisihana (nitranga in-1) : Niresaka momba ny “famadihana ho lalao ny zava-drehetra izy hamahana olana sy hanatsaran-javatra (gamification)” ary nanasongadina hevitra ahafaha-manangana zava-baovao handrisihana ny olona tsy hanipy fako eny an-dalana. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Nitana (nitranga in-1) : Nitana ny laharana
fahefatra tamin' ny isam-bato 9% ity farany. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Petit (nitranga in-1) : Mbola misy rahateo ny tarika Médicis izay ahitana an'i Coco izay renin-janany, Petit eo amin'ny amponga lava ary Dominique amin'ny fitendrena ny angorodao. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
misesi­sesy (nitranga in-1) : Tsy fahatapahana maharitra anefa, fa irony tapaka kely, anefa misesi­sesy irony. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
ISTS (nitranga in-1) : Marihina fa sampana iray ao amin'ny sekoly katolika ICM etsy Ambatoroka ihany ny ISTS. (Tapatapany)
Jentilisa (nitranga in-1) : com/gxirTLir8v
Twitter (nitranga in-1) : Tratran'ny fintaintainan'ny Mondialy ny tangoron'olona tao Algers, araka ity sary hita ao amin'ny kaonty Twitter an'ny mpisera Bilel. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
ireto (nitranga in-6) : ***Voatifitra teny ambony môtô> Notifirin'ny jiolahy tamin'ny basy teny ambony môtô ireto lehilahy mpianaka avy namonjy tsena tany Ambalanirana, fokontanin' Ankianja­mandroso,ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 6 ora hariva. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
solontenan' (nitranga in-1) : «Hiezaka izahay ny tsy handraraka ilo mby an-doha amin'ny maha solontenan'ny ekipana fokontany anay», hoy i Faneva Raholdina, mpanazatra ny TFMA feno fanantenana amin'ny hisalorana ny anaram-boninahitra eto Analamanga. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
niova (nitranga in-1) : Pitsopitsony kely no niova. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
namela (nitranga in-1) : namela sanganasa maro i Medicis (mitrotro zaza)
nadika (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
France (nitranga in-1) : Tao anaty fahagagana no nandresen'i Frantsa 3-0 tamin'ny lalao miverina, nitraka horakora-pifaliana tamin'ny mpanohana an'i Frantsa sy fahadisoam-panantenana teo amin'ny mpanohana Okrainiana:
Vital (nitranga in-1) : Ankilan'izay rehetra izay anefa dia tsy niolaka mihitsy ny kandidà Camille Vital izay nahazo isam-bato 6,85% omaly raha nilaza fa «tsy misy maharesy lahatra ahy mihitsy ireo kandidà roa hiatrika an'io fifidianana fihodinana faharoa io ». (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Afrika (nitranga in-2) : Sehatra iray hahafanan'ny iray amin'izy ireo hisolo tena ny Malagasy amin'ny fiadiana ny amboaran'
i Afrika (CAF) ity lalao ity. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Leon (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
nosafidy (nitranga in-1) : Teny faneva nosafidin'izy ireo ny hoe « Havan'ny olona rehetra sy mpirahalahy daholo ny Tily », noho izany dia tsy anavahana finoana fa rehefa Tily dia hiara-hankalaza ny faha-90 taona niorenany avo­koa ny 30 novambra ho avy izao. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
ankabetsahan' (nitranga in-1) : Voalazan'ny loharanom-baovao avy amin'ny mpitandro ny filaminana ihany fa mpivaro-kena koa ny ankabetsahan'ireo nanafika. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
nihodinkondina (nitranga in-1) : Mbola nilaza ho nahita izany hazavana be nitaratra nihodinkondina nandritra ny fotoana vitsy avy tao am­bony rihana izany ihany koa anefa ireo fianakaviana hafa monina ao ambany rihana tamin'io fotoana io, ary nihiaka mafy sy nian­tsoantso raha nahatazana izany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Vatovavy (nitranga in-1) : Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony, Androy, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana, ireo faritra dimy ireo no isan'ny ahitana ireto aretina ireto betsaka indrindra. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
nianarany (nitranga in-1) : Miaina anaty tontolo hafa mihitsy izy, mitokatokana, hany ka voaroaka tany amin'ny sekoly nianarany. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
nanakarama (nitranga in-1) : Bokan-trosa
Lehilahy mpivaro-kena iray ao an-tanàna no ahian'ny mpitandro ny filaminana fa nanakarama olona hanafika an'ireo mpanangom-bokatra, rehefa fantany fa misy volabe ao amin'izy ireo. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
voasambotry (nitranga in-1) : Ny 11 tamin'ireo mpa­nafika no voasambotry ny zandarimaria taorian'ny fifandonana. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
mampitaintaina (nitranga in-1) : com/NsYMblqE7G
Fenoarivo (nitranga in-2) : Nanazava tamin'ireo namany ny antony nahafaty ireo nihinana hazan-dranomasina tany Fenoarivo Atsinanana kosa i Nantenaina no nifanena taminay, zary raiki-tahotra amin'ny fihinanana trondron-dranomasina izy amin'izao. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
andianà (nitranga in-1) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
reddit (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
compartir (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
namoaka (nitranga in-2) : com/L8YTbiUDYo
manodi­dina (nitranga in-1) : Tato ho ato, saika ny faritra rehetra eto Antananarivo, hatrany amin'ireo tanàna manodi­dina no miaina anatiny haizina. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
hampiasana (nitranga in-1) : Te-hifandray amin'ireo olona izay manan-kevitra mikasika ny fomba tsara hampiasana ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ihany koa izahay, ary mitady olon-kafa hanatevin-daharana azy ireo na mitady fomba hitadiavana fanampiana ara-bola. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
experiencia (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
noenty (nitranga in-1) : Mba hahafahan'ny zaza “autiste” miaina ara-dalàna, dia ilaina indrindra ny fanaraha-maso manokana azy ireny”, hoy hatrany ny fanazavana noentin'ny mpitsabo. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
ataon' (nitranga in-1) : Na dia averimberina matetika aza fa lalao fotsiny ihany ireny lalao ireny, ny fihetsika ataon'ny olona aloha sy aorian'ny lalao sasany no maneho fa misy zavatra hafa kokoa tian'ny rehetra hametrahana azy ireny. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
fila­minana (nitranga in-2) : Nanomboka afak'omaly ary nitohy omaly ny fanenjehan'ny mpitandro ny fila­minana an'ireo jiolahy. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
lava (nitranga in-1) : Mbola misy rahateo ny tarika Médicis izay ahitana an'i Coco izay renin-janany, Petit eo amin'ny amponga lava ary Dominique amin'ny fitendrena ny angorodao. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
karakaray (nitranga in-1) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
prise (nitranga in-1) : ity :
kandidà (nitranga in-22) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Ambohitsorohitra (nitranga in-1) : Haingana ny fiakaran-dRajaonarimampianina Hery tetsy Ambohitsorohitra taorian'ny lanonam-pitsarana tetsy Ambohidahy, omaly. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
ahora (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
sangansany (nitranga in-1) : Anisan'ireo sangansany nisongadina ireo miaramila mpiandry miisa 1000 izay hiarahan'ny vy sy ny vato madio. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
utilizar (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Mohamed (nitranga in-3) : Mohamed El-Gohary, Mohamed Adel ary ny tenako no nandrindra ny hetsika. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Ambalabe (nitranga in-1) : Tra-tehaka ihany koa ny basim-borona telo sy basy vita gasy iray miampy ny ampaham-bola norobain' ireo jiolahy tany Ambalabe. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
hypocrites (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
hoentiny (nitranga in-1) : Io omaly io aloha dia tsy mbola namboraka ny paikady hoentiny miatrika ny fihodinana faharoa i Jean Louis Robinson. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
UASC (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
isorohana (nitranga in-1) : Fanafody manokana sy fampiasana lay misy ody moka ihany no azo isorohana azy. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
hahavita (nitranga in-1) : 100 ny vitany tany am-boalohany, feno 200 amin'ity taona ity ary ezahiny ny hahavita ireo miaramilan'ny fandriampahalemana 1000 ireo. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
licence (nitranga in-1) : Mpianatra miisa 61 nisalotra ny anarana « Masoandro » no notolorana ny mari-pahaizana « licence professionnelle » sy « Master » nandritra ny fotoana. (Tapatapany)
notolorana (nitranga in-1) : Mpianatra miisa 61 nisalotra ny anarana « Masoandro » no notolorana ny mari-pahaizana « licence professionnelle » sy « Master » nandritra ny fotoana. (Tapatapany)
Mahambo (nitranga in-1) : Teo ihany koa ny tao Mahambo izay voalaza fa nanaovan' ny Lehiben'ny faritra fanambarana mivantana mihitsy mba hifidianana an'ity kandidà ity. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
nataon' (nitranga in-5) : Tsy ny hazan-dranomasina rehetra anefa no tsy azo hohanina, fa ireo nihinana poizina ihany ” hoy ny fanambarana nataon'ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Olga Ramaroson. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
antenantenan' (nitranga in-1) : Niara-niasa izy mirahalahy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina saingy nifindra tampoka tany amin'ny AS Saint Michel i Raux teny antenantenan'ny fifaninanan' Analamanga. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
raveloarinosy (nitranga in-1) : raveloarinosy Mbolatiana renin'i Achile
notanterahina (nitranga in-3) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
ekipana (nitranga in-3) : Saika ireo ekipana orinasa avokoa ny telo amin'ireo efatra tafita (IRC, Cosfa ary 3FB). (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
naharombaka (nitranga in-1) : com/NsYMblqE7G
Amoron' (nitranga in-1) : Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony, Androy, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana, ireo faritra dimy ireo no isan'ny ahitana ireto aretina ireto betsaka indrindra. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
heveriny (nitranga in-1) : Raha bedesina izy manao izany, dia tsy azony fa heveriny ho misangy azy, ka vao mainka izy mihomehy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
coupe (nitranga in-1) : Fa mbola heniky ny rehareham-pandresena ihany i Yaoundé, renivohitra ara-toekaren'i Kamerona, taorian'ny fandresena:
nitrngan' (nitranga in-1) : ny 20 novambra teo no nitrngan'ilay fanafihana tany amin'ny faritra Vatomandry
mahavanona (nitranga in-1) : Mbola tsy tena mahavanona firy ny fahavaratra hatreto. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
Phonm (nitranga in-1) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Roméo (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
nahafahako (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
fiara (nitranga in-2) : Ny tao Fenoarivo Atsinanana indray dia voalaza fa nampiasa fiara tsy mataho-dalana an'ny faritra ny tenany, ankoatra ny fivoriana nampiasana fahefam-panjakana ny 15 oktobra. (Sombiny)
rivelo (nitranga in-1) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Ejypta (nitranga in-1) : Mpandray anjara roa hafa, mpanao gazety mpanao famotorana sy mpianatra lalàna nahita marimaritra iraisana tamin'ny firesahana ny tokony hanovàna ny lalàna mikasika ny fahalalahana hahazo vaovao ao Ejypta mba hanatontosan'ireo mpanao gazety tsara ny asany. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
28°C (nitranga in-1) : Mbola hanodidina ny 28°C hatrany amin'ny 30°C ny mari-pana ho hita eto an-drenivohitra. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
hiarahan' (nitranga in-1) : Anisan'ireo sangansany nisongadina ireo miaramila mpiandry miisa 1000 izay hiarahan'ny vy sy ny vato madio. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Arivonimamo (nitranga in-1) : « Dimy taona lasa izay tany Arivonimamo dia efa nilatsaham-potaka ihany koa tao an-tranonay ka torana vokatry ny fipoahan'ilay izy mafy dia mafy izahay roa vavy tao an-trano. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
hatra­my (nitranga in-1) : Mitarika hatra­min'ny fahafatesana ireo aretina ireo, raha tsy misy fandraisana an-tanana. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
algeriens (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
hahatanterahan' (nitranga in-1) : ***Praiminisitra Omer Beriziky : « Dingana lehibe no vita ary vonona ny handray ny andraikiny hanao izay fomba rehetra hahatanterahan'ny fihodinana faharoa amin'ny Fifidianana Filoham-pirenena ny fitondram-panjakana. (HOY RY ’ZALAHY)
Michel (nitranga in-1) : Niara-niasa izy mirahalahy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina saingy nifindra tampoka tany amin'ny AS Saint Michel i Raux teny antenantenan'ny fifaninanan' Analamanga. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
ailikiliky (nitranga in-1) : Zary ailikiliky ny fiarahamonina izy ireny matetika, noho izay fitokana-moniny sy fanaovany fihetsika hafahafa izay. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
nanafika (nitranga in-1) : Voalazan'ny loharanom-baovao avy amin'ny mpitandro ny filaminana ihany fa mpivaro-kena koa ny ankabetsahan'ireo nanafika. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Nana­marika (nitranga in-1) : Nana­marika ny mpitsabo iray, fa tsy aretina akory ny fitokana-monina sy ny fiainana anaty tontolo hafa, fa toe-tena mitarika fikorontanana eo amin'ny fitomboan'ny zaza. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Elia (nitranga in-1) : Nanolotra ny mari-boninahitra ho azy ny minisitry ny Vakoka sy ny kolontsaina, Elia Rave­loma­nantsoa. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
googleplus (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
ekipan' (nitranga in-3) : Efa nitondra ny ekipan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny taon-dasa i Raux Auguste, izay mitantana indray ny ekipan'ny masindahy Misely amin'izao fotoana. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
nahafatesany (nitranga in-1) : namela sanganasa maro i Medicis (mitrotro zaza)
Dona (nitranga in-1) : Dona lehibe ho anay ny nahalalana fa tsy misy fanafody afaka hanasitrana an'i Achille mihitsy”, hoy Raveloarinosy Mbolatiana. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Côte (nitranga in-5) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
orambe (nitranga in-1) : Hatairana sy hagagàna ny an'ity tovovavy miasa amin'olona eny Andoharanofotsy raha nidiran'ny varatra tao an-tokan­trano, ny talata teo tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro, tamin'ny fotoana nisian' ny orambe iny. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Andranomadio (nitranga in-1) : ***Renim-pianakaviana maty tamin'ny môtô> Namoy ny ainy taoriana kelin'ny nitondrana azy teny amin'ny hôpitaly ny renim-pianakaviana iray noho ny loza-pifamoi­voizana nahazo azy ny 21 novambra teo tamin' ny 6 ora maraina, tany amin'ny fokontanin' Andranomadio, kaominina ambanivohitr'i Fihao­nana. (Sombiny)
hisian' (nitranga in-1) : Tsy sokajian'ny mpitondra mbola ho faritra tena hisian'ny asan-jiolahy ve izany ireo faritra sasany toa an'Analamanga ohatra, matoa tsy mba nosoloina miaramila ny Lehiben'ny faritra tao. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
norobay (nitranga in-2) : ***Mpivarotra enta-madinika voatafika> Vola mitentina Ar 1 500 000 no norobain'ny jiolahy miisa 10, nitondra basy kalachnikov telo tany amin'ny fokontanin'Ampasika, kaominina ambanivohitra Itaosy ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 8 ora alina. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Starlight (nitranga in-2) : Niondrika tao amin' ny taniny tamin'ny seta 3 no ho 0 (25/18, 25/20, 25/14) ny Curepipe Starlight avy ao Maorisy nanoloana ny ekipa tompondakan'i Madagasikara. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
diabe (nitranga in-1) : « Ho fanamarihana io andro malaza io dia hikarakara diabe ny fikambanana hiainga eny Anosy, Amparibe ary Antanimbarinandriana ka hihazo ny lapan'ny Kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina, toerana hanaovana ny lanonana sy ny fiderana miaraka. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
soir (nitranga in-1) : Tao anaty fahagagana no nandresen'i Frantsa 3-0 tamin'ny lalao miverina, nitraka horakora-pifaliana tamin'ny mpanohana an'i Frantsa sy fahadisoam-panantenana teo amin'ny mpanohana Okrainiana:
sociales (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
fifanenjanana (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
éléphants (nitranga in-1) : com/T9utitCPgT
— éléphants au Brésil (@Le_TonTon_) November 19, 2013 Brezila, ho avy izahay Kamerona vs. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Randrianja (nitranga in-1) : Juliano Randrianja. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
zanakalahy (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Napetraka (nitranga in-1) : Napetraka avy hatrany ny vela-pandrika taorian' izay. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
ball (nitranga in-2) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
tellement (nitranga in-1) : ity :
Cameroun (nitranga in-2) : Fa mbola heniky ny rehareham-pandresena ihany i Yaoundé, renivohitra ara-toekaren'i Kamerona, taorian'ny fandresena:
Nanatontosa (nitranga in-1) : Nanatontosa lahatsary fohy momba ny Global Voices ihany koa izahay, nilaza ny fahafinaretana ao amin'izany hoe fiarahamonina midadasika manerantany tahaka ny Global Voices izany i El-Gohary. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
fahapoizinana (nitranga in-1) : Tsy ny eto Antana­narivo ihany anefa no ahitana fihenana ny fanjifana trondron-dranomasina, fa hatrany amin'ireo faritra nahitana fahafatesana nateraky ny fahapoizinana, toa an'Antsiranana. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
volley (nitranga in-2) : nitohy hatrany, tsy nisy nahasakana, ny dian'ny Stef'Auto ho eo amin'ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana taranja volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Burkina (nitranga in-5) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
lehibebe (nitranga in-1) : Ankehitriny, afaka mitàna anjara toerana lehibebe kokoa amin'ny famokarana votoatim-peo ireo mpandray anjara, sy ny fikirakirana ny fitaovana fampiasa amin'ny radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
tratrany (nitranga in-1) : Matetika no manaikitra izy, ary tsy avelany raha tsy efa mandeha rà izay tratrany. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
navondrona (nitranga in-1) : Niry Andriamora sy RA-PHI no navondrona ao anatin'ny «Tsinkafona». (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
nifarana (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
dada (nitranga in-1) : I Dokotera, mety nitafa ora maro tamin'i dada, sa zokiny sa zandriny, momba ny tohin'ny paik'ady hatao. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Pierre (nitranga in-1) : «Nisy naman'i Médics mirahalahy, Phikippe Imbert sy Pierre Cassé efa nanolotra angorodao ho azy», hoy ihany i Coco. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
hitondra (nitranga in-2) : Izany no hiantoka sy hitondra antsika any amin'ny famahana ny krizy sy hirosoana any amin'ny Repoblika
faha-IV ». (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
hôpitaly (nitranga in-1) : ***Renim-pianakaviana maty tamin'ny môtô> Namoy ny ainy taoriana kelin'ny nitondrana azy teny amin'ny hôpitaly ny renim-pianakaviana iray noho ny loza-pifamoi­voizana nahazo azy ny 21 novambra teo tamin' ny 6 ora maraina, tany amin'ny fokontanin' Andranomadio, kaominina ambanivohitr'i Fihao­nana. (Sombiny)
mpa­nafika (nitranga in-1) : Ny 11 tamin'ireo mpa­nafika no voasambotry ny zandarimaria taorian'ny fifandonana. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
audio (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
kaomoriana (nitranga in-1) : Mpanazatra maorisiana, seiseloa, kaomoriana ary avy any Rodrigues no mandray anjara hatramin'ny 6 desambra ho avy izao. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
sanganasa (nitranga in-1) : namela sanganasa maro i Medicis (mitrotro zaza)
COSFA (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
hanafika (nitranga in-1) : Bokan-trosa
fahitalavi­tra (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
nampianarina (nitranga in-1) : Efa nampianarina anay avokoa ireo paika rehetra ihoarana amin'ireo olana mety hitranga any an'ala, toy ireo sakafo fihinana sy ny tsia, ny fahafantarana ora amin'ny alalan' ny fikisaky ny masoandro ary indrindra nahafahako niatrika olana maro mandalo amin'ny fiainako », hoy Rakotoharisoa Sarah, 22 taona, vaomieram-paritany Antananarivo afo­voany. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Glaive (nitranga in-1) : Hisokatra anio ao Vacoas ny fampianarana tarihin'i André Glaive, manam-pahaizana frantsay iraka manokan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Fútbol (nitranga in-1) : com/gxirTLir8v
nampilaza (nitranga in-1) : Nahazo antso ny zandary avy ao amin'ny vondron-tobim-paritra Moramanga ka nandefa zandary sy nampilaza ny tao amin'ny zana-tobim-paritra Befo­rona. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
Tsiroano­mandidy (nitranga in-1) : Naratra mafy ary nalefa notsaboina tany amin'ny hopitalin'i Tsiroano­mandidy kosa ny vadiny. (Sombiny)
Hajo (nitranga in-2) : tsy mbola resy lahatra hanohana ny iray amin'ireo kandidà hiatrika ny fihodinana faharoa i Hajo Andrianaina- rivelo sy Roland Ratsiraka, izay kandidà nitana ny laha- rana fahatelo sy fahefatra tamin' ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana voa- lohany notanterahina ny 25 oktobra lasa teo. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
nandrindra (nitranga in-1) : Mohamed El-Gohary, Mohamed Adel ary ny tenako no nandrindra ny hetsika. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nitafa (nitranga in-1) : I Dokotera, mety nitafa ora maro tamin'i dada, sa zokiny sa zandriny, momba ny tohin'ny paik'ady hatao. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
atrikasa (nitranga in-3) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
averimberina (nitranga in-1) : Na dia averimberina matetika aza fa lalao fotsiny ihany ireny lalao ireny, ny fihetsika ataon'ny olona aloha sy aorian'ny lalao sasany no maneho fa misy zavatra hafa kokoa tian'ny rehetra hametrahana azy ireny. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
nijery (nitranga in-2) : Tsy nahitana faritra may koa anefa io fitaovana io
Toamasina (nitranga in-2) : Nisantaran'izy ireo izany ny «Nofy-Tiako» an'i Rima teto Antananarivo ny volana septambra, «Nizahatany» kosa tany Toamasina ny 16 novambra teo…
FR. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
fanapoizi­nana (nitranga in-1) : maro amin'ireo mpanjifa no matahotra ny fahapozinana avy amin'ny trondro
Analamanga (nitranga in-3) : Niara-niasa izy mirahalahy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina saingy nifindra tampoka tany amin'ny AS Saint Michel i Raux teny antenantenan'ny fifaninanan' Analamanga. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
vakiana (nitranga in-1) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
hahafahana (nitranga in-1) : Sedra iray hahafahana mahazo ny mari-pahaizana mpanazatra dingana faharoa izy ity. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Hermes (nitranga in-1) : Tsy hijanona amin'ireo faritra ireo ihany fa haparitaka manerana ny Nosy», hoy ny Dr Andrianarisoa Hermes, mpitsabo eo anivon'ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (Oms). (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
match (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
globalvoicesonline (nitranga in-1) : globalvoicesonline. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Kampala (nitranga in-1) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
hiantoka (nitranga in-1) : Izany no hiantoka sy hitondra antsika any amin'ny famahana ny krizy sy hirosoana any amin'ny Repoblika
aretina (nitranga in-6) : miroso amin'ny fana­foanana ny aretina notsi­notsinoavina. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Commons (nitranga in-2) : Notsipihanay fa ny lahatsoratra GV rehetra dia avoaka amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana Creative Commons. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Avila (nitranga in-1) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Niondrika (nitranga in-1) : Niondrika tao amin' ny taniny tamin'ny seta 3 no ho 0 (25/18, 25/20, 25/14) ny Curepipe Starlight avy ao Maorisy nanoloana ny ekipa tompondakan'i Madagasikara. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
natao (nitranga in-2) : «Efa miroso ny paikady ary nisy fanovana natao mahakasika an'izany. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
nandresen' (nitranga in-1) : Tao anaty fahagagana no nandresen'i Frantsa 3-0 tamin'ny lalao miverina, nitraka horakora-pifaliana tamin'ny mpanohana an'i Frantsa sy fahadisoam-panantenana teo amin'ny mpanohana Okrainiana:
Hitondra (nitranga in-1) : Hitondra ny «Tsikafona» anio manomboka amin'ny 3 ora ireo mpikambana ao amin'ny Faribolan'ny Poeta sy Mpanoratra Sandratra avy any Antsirabe. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
seront (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
Antanimbarinandriana (nitranga in-1) : « Ho fanamarihana io andro malaza io dia hikarakara diabe ny fikambanana hiainga eny Anosy, Amparibe ary Antanimbarinandriana ka hihazo ny lapan'ny Kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina, toerana hanaovana ny lanonana sy ny fiderana miaraka. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
kandidan' (nitranga in-1) : Tetsy ankilan'izay anefa dia somary nanindrom-paingotra ny kandidà mpifaninana aminy ihany ity kandidan'ny ankolafy Ravalomanana ity. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
pikantsary (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
naharenesana (nitranga in-1) : Nanomboka tamin'ny naharenesana fahafatesana noho ny fihinanana hazan-dranomasina anefa, dia zara raha misy olona 100 sisa tonga ato aminay. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Lingua (nitranga in-1) : Matetika mihaona amin'ireo olona liana amin'ny hetsika rehetra atao ao amin'ny tontolon'ny GV izahay, saingy tsy dia fantany loatra ny fomba ahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo, ka napetraka izany fihaonana izany mba hampahafantarana amin' ireo olona ny Global Voices sy ny tetikasany madinika, Lingua, Advox ary ny Rising Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nahalalan' (nitranga in-1) : Tapa-taona izao no nahalalan'ny fianakavian'i Achille, zazalahy telo taona sy tapany, fa manana ny toe-tena “autiste” izy. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
geba (nitranga in-1) : Fadiana indrindra ny mihinana atsantsa, geba, “sardine”, “sardinelle”, soka-dranomasina amin'izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Rising (nitranga in-4) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
fintaintainan' (nitranga in-1) : Tratran'ny fintaintainan'ny Mondialy ny tangoron'olona tao Algers, araka ity sary hita ao amin'ny kaonty Twitter an'ny mpisera Bilel. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Nanazava (nitranga in-1) : Nanazava tamin'ireo namany ny antony nahafaty ireo nihinana hazan-dranomasina tany Fenoarivo Atsinanana kosa i Nantenaina no nifanena taminay, zary raiki-tahotra amin'ny fihinanana trondron-dranomasina izy amin'izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
Subervie (nitranga in-2) : Notoloran'ny minisiteran'ny vakoka sy ny kolontsaina ny mariboninahitry ny zavakanto sy ny asa soratra ary ny kolontsaina i Sylvain Subervie, mpanakanto eo amin'ny asa vy sy ny asa vato ary ny fanaingoana. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
napetraka (nitranga in-1) : Matetika mihaona amin'ireo olona liana amin'ny hetsika rehetra atao ao amin'ny tontolon'ny GV izahay, saingy tsy dia fantany loatra ny fomba ahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo, ka napetraka izany fihaonana izany mba hampahafantarana amin' ireo olona ny Global Voices sy ny tetikasany madinika, Lingua, Advox ary ny Rising Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
twitter (nitranga in-12) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Cosfa (nitranga in-3) : Tsy hionona amin'izao kosa ny Cosfa sy ny TFM Ankasina na dia efa tany amin'ny lalao sakana aza vao tafita hiatrika io dingan' ny manasa-dalana io. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Selouk (nitranga in-1) : Nianatra fanaovan-tsary ara-indostrialy ny iray tamin'ireo mpandray anjara, ary nampiseho anay ny bilaoginy, Selouk. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
mpisera (nitranga in-1) : Tratran'ny fintaintainan'ny Mondialy ny tangoron'olona tao Algers, araka ity sary hita ao amin'ny kaonty Twitter an'ny mpisera Bilel. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Master (nitranga in-1) : Mpianatra miisa 61 nisalotra ny anarana « Masoandro » no notolorana ny mari-pahaizana « licence professionnelle » sy « Master » nandritra ny fotoana. (Tapatapany)
Maha­vita (nitranga in-1) : « Maha­vita mivelona herinandro maninjitra any anaty ala ny tenako ankehitriny. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
lalàna (nitranga in-4) : Notsindriany ihany anefa fa tokony hanaraka ny lalàna mifehy ny fifidianana izay endrika fanohanan'ny Filohan'ny tetezamita azy izay. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
mampilatsaka (nitranga in-1) : Mbola mavesatra ihany ny rivotra vokatr'ireo setroka maro samihafa ka izay no tsy mampilatsaka ny orana. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
nifanandrinan' (nitranga in-1) : com/d5MSIhFEjv
lojika (nitranga in-1) : Voahaja ny lojika teo amin'ity manasa-dalana ity satria sambany no tonga teo amin'ny manasa-dalana ny Curepipe Starlight, raha efa voahosotra ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana (2011) kosa ny Stef'Auto ary efa zatra lalao iraisam-pirenena taty amin'ny faritra fahafito. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
ankilan' (nitranga in-1) : Tetsy ankilan'izay anefa dia somary nanindrom-paingotra ny kandidà mpifaninana aminy ihany ity kandidan'ny ankolafy Ravalomanana ity. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
jaobily (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
nanendrena (nitranga in-1) : Saika ireo faritra heverina fa mafampana amin'ny asan-dahalo sy ny tsy fandriampahalemana no nanendrena an'ireo miaramila ireo, araka ny fanazavan-kevitra nataon'ny Praiminisitra. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
nateraky (nitranga in-1) : Tsy ny eto Antana­narivo ihany anefa no ahitana fihenana ny fanjifana trondron-dranomasina, fa hatrany amin'ireo faritra nahitana fahafatesana nateraky ny fahapoizinana, toa an'Antsiranana. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
rakitsary (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
tarihy (nitranga in-1) : Hisokatra anio ao Vacoas ny fampianarana tarihin'i André Glaive, manam-pahaizana frantsay iraka manokan'ny federasiona iraisam-pirenena ho an'ny volley ball. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
nandrenesan' (nitranga in-1) : Nanaitra ny renin'i Vavara Medicis, zanakalahin'ity andrarezin'ny fitendrena angorodao, maty notsindronin'ny jiolahy antsy teny Antanimena ny volana marsa 2010, ity ny nahitana sy nandrenesan'izy ireo hiran'i Médicis nivoaka rakitsary tamin'ny fahitalavi­tra samihafa. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
distrikan' (nitranga in-1) : ny 20 novambra teo no nitrngan'ilay fanafihana tany amin'ny faritra Vatomandry
raciste (nitranga in-1) : com/L8YTbiUDYo
mpilalao (nitranga in-1) : samy afaka milalao avokoa ireo mpilalao 25 ho an'ny andaniny sy ny ankilany mandritra io lalao famaranana io. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
minisiteran' (nitranga in-1) : Notoloran'ny minisiteran'ny vakoka sy ny kolontsaina ny mariboninahitry ny zavakanto sy ny asa soratra ary ny kolontsaina i Sylvain Subervie, mpanakanto eo amin'ny asa vy sy ny asa vato ary ny fanaingoana. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
volabe (nitranga in-1) : Bokan-trosa
ezahiny (nitranga in-1) : 100 ny vitany tany am-boalohany, feno 200 amin'ity taona ity ary ezahiny ny hahavita ireo miaramilan'ny fandriampahalemana 1000 ireo. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Antanana­rivo (nitranga in-1) : Aorian'izay dia andro maina indray no ho hita eto Antanana­rivo. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
fahatafitàny (nitranga in-1) : com/NsYMblqE7G
Sylvain (nitranga in-2) : Notoloran'ny minisiteran'ny vakoka sy ny kolontsaina ny mariboninahitry ny zavakanto sy ny asa soratra ary ny kolontsaina i Sylvain Subervie, mpanakanto eo amin'ny asa vy sy ny asa vato ary ny fanaingoana. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Fitovinany (nitranga in-1) : Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony, Androy, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana, ireo faritra dimy ireo no isan'ny ahitana ireto aretina ireto betsaka indrindra. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
Karachy (nitranga in-1) : mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana ao Karachi, Kampala, Skopje, Porto, Phonm Penh ary ao Kairo ny Global Voices. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
manerantany (nitranga in-1) : Nanatontosa lahatsary fohy momba ny Global Voices ihany koa izahay, nilaza ny fahafinaretana ao amin'izany hoe fiarahamonina midadasika manerantany tahaka ny Global Voices izany i El-Gohary. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
notsi­notsi­noavina (nitranga in-1) : Hozaraina fanafody misoroka amin'ireto aretina sokajiana ho notsi­notsi­noavina ireto ireo faritra dimy ireo. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
nanana (nitranga in-1) : Omaly maraina dia nahatratra 13 ireo olona ahiana ho nanana andraikitra tamin'ity fanafihana ity no nosamborina ka isan'izany ilay filoham-pokontany. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
iainan' (nitranga in-1) : Mitantara ny iainan'ny zanany, Raveloarinosy Mbolatiana, renin'i Achille. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
izaroa (nitranga in-1) : Samy faly, na dia toy akohokely notsipazam-potsimbary aza, fa tsy nahoan'ny teny Ambohidahy ireo resaka sy tsaho niely “cesilany” momba ny fanilihana an'izatsy na izaroa. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
nojinjainy (nitranga in-1) : 90 taona
12 taona no naha mpikambana Tily ny tovovavy ary efa maro raha ny voka-tsoa nojinjainy nandritra izay fotoana izay. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Imbert (nitranga in-1) : «Nisy naman'i Médics mirahalahy, Phikippe Imbert sy Pierre Cassé efa nanolotra angorodao ho azy», hoy ihany i Coco. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
arahy (nitranga in-2) : Hanomboka amin'ny fifaninanana eo amin'ny sokajy vehivavy Top 6 izany, arahin'ny sokajy Junior anio. (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
Itaosy (nitranga in-2) : ***Mpivarotra enta-madinika voatafika> Vola mitentina Ar 1 500 000 no norobain'ny jiolahy miisa 10, nitondra basy kalachnikov telo tany amin'ny fokontanin'Ampasika, kaominina ambanivohitra Itaosy ny 21 novambra teo tokony ho tamin' ny 8 ora alina. (Sombiny)
Ambatoroka (nitranga in-1) : Marihina fa sampana iray ao amin'ny sekoly katolika ICM etsy Ambatoroka ihany ny ISTS. (Tapatapany)
hanatontosan' (nitranga in-1) : Mpandray anjara roa hafa, mpanao gazety mpanao famotorana sy mpianatra lalàna nahita marimaritra iraisana tamin'ny firesahana ny tokony hanovàna ny lalàna mikasika ny fahalalahana hahazo vaovao ao Ejypta mba hanatontosan'ireo mpanao gazety tsara ny asany. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
hahafahan' (nitranga in-1) : Mba hahafahan'ny zaza “autiste” miaina ara-dalàna, dia ilaina indrindra ny fanaraha-maso manokana azy ireny”, hoy hatrany ny fanazavana noentin'ny mpitsabo. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
Nolavy (nitranga in-1) : Nolavin'ity Fitsarana ity araka izany ny vato azon'ny kandidàn' ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara tamina distrika efatra. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
nilaza (nitranga in-5) : Ankilan'izay rehetra izay anefa dia tsy niolaka mihitsy ny kandidà Camille Vital izay nahazo isam-bato 6,85% omaly raha nilaza fa «tsy misy maharesy lahatra ahy mihitsy ireo kandidà roa hiatrika an'io fifidianana fihodinana faharoa io ». (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
ekipa (nitranga in-2) : Niondrika tao amin' ny taniny tamin'ny seta 3 no ho 0 (25/18, 25/20, 25/14) ny Curepipe Starlight avy ao Maorisy nanoloana ny ekipa tompondakan'i Madagasikara. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
hitadiavana (nitranga in-1) : Te-hifandray amin'ireo olona izay manan-kevitra mikasika ny fomba tsara hampiasana ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ihany koa izahay, ary mitady olon-kafa hanatevin-daharana azy ireo na mitady fomba hitadiavana fanampiana ara-bola. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Yannick (nitranga in-1) : com/NsYMblqE7G
hahafanan' (nitranga in-1) : Sehatra iray hahafanan'ny iray amin'izy ireo hisolo tena ny Malagasy amin'ny fiadiana ny amboaran'
i Afrika (CAF) ity lalao ity. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
Nomarihy (nitranga in-1) : Nomarihin'izy ireo fa tsy misakana ny hamelomana ireo hiran'i Médicis izy ireo fa mitaky kosa ny fifanajana sy ny fiarovana ny zon'ny mpandova. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
Nicoletta (nitranga in-1) : «Efa nahare feo aza izahay fa mikasa ny hamoaka rakikira amin'ireo sanganasan'i Médicis izy ireo», araka ny fanazavan'i Nicoletta Rinisoa na Coco, renin'i Vavara Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
nodidiana (nitranga in-1) : Noeritreretina ho manana olana ara-pahenoana izy, ka nodidiana ny sofiny. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
nanafoanana (nitranga in-1) : Fanerena mpiasam-panjakana, ny mpampianatra sy mpianatra hiatrika ny fampielezan-kevitr'ity kandidà ity, ny 22 oktobra kosa no nanafoanana an'ireo ampaham-bokatra tany Ambovombe Androy. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
après (nitranga in-1) : Nivandravandra tamin'ny alalan'ny dihy ny hafalian'ny ekipa rehefa nifarana ny lalao:
voahosotra (nitranga in-1) : Voahaja ny lojika teo amin'ity manasa-dalana ity satria sambany no tonga teo amin'ny manasa-dalana ny Curepipe Starlight, raha efa voahosotra ho tompondakan'ny Ranomasimbe Indiana (2011) kosa ny Stef'Auto ary efa zatra lalao iraisam-pirenena taty amin'ny faritra fahafito. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Moramanga (nitranga in-1) : Nahazo antso ny zandary avy ao amin'ny vondron-tobim-paritra Moramanga ka nandefa zandary sy nampilaza ny tao amin'ny zana-tobim-paritra Befo­rona. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
marobe (nitranga in-1) : Ho an'ireo mpandray anjara marobe, ny lohahevitra resahana amin'ny atrikasa dia loharanom-pampidirana lohahevitra vaovao mifandraika amin'ny fandaharana mivantana efa misy isaky ny herinandro ao amin'ny radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
aprendiendo (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
nofoanana (nitranga in-1) : Nahatratra 5774 ny vaton'ity kandidà nahazo ny laharana faharoa ity no nofoanana noho ny antony maro. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Cassé (nitranga in-1) : «Nisy naman'i Médics mirahalahy, Phikippe Imbert sy Pierre Cassé efa nanolotra angorodao ho azy», hoy ihany i Coco. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
mini­siteran' (nitranga in-1) : Ny mini­siteran'ny Fanabeazam-pirenena sy ny fahasalamam-bahoaka no isan'ny mandray an-tanana izao hetsika izao. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
sokajian' (nitranga in-1) : Tsy sokajian'ny mpitondra mbola ho faritra tena hisian'ny asan-jiolahy ve izany ireo faritra sasany toa an'Analamanga ohatra, matoa tsy mba nosoloina miaramila ny Lehiben'ny faritra tao. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
Alzeriana (nitranga in-1) : com/d5MSIhFEjv
hanetsehana (nitranga in-1) : Sady hanehoana ny faha-90 taona io no endrika hanetsehana ny hery rehetra ato amin'ny fikambanana », hoy kosa Raveloarison Leon Claude, filohan'ny kaomitin'ny jaobily. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
iharan' (nitranga in-1) : Ny faritra Antananarivo ihany no iharan'izao fiovaovan'ny toetry ny andro izao, fa ny any amin'ireo faritra sasany toy ny any Atsimo, Andrefana, Menabe ary Atsinanana kosa dia mizotra ara-dalàna tsara ny vanim-potoana fahavaratra. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
nimatimatesan' (nitranga in-1) : HERY RAJAONARIMAMPIANINA- «Vonona hanohy ny tolona tamin'ny 2009 aho»
spots (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Anosy (nitranga in-1) : « Ho fanamarihana io andro malaza io dia hikarakara diabe ny fikambanana hiainga eny Anosy, Amparibe ary Antanimbarinandriana ka hihazo ny lapan'ny Kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina, toerana hanaovana ny lanonana sy ny fiderana miaraka. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
hijanona (nitranga in-1) : Tsy hijanona amin'ireo faritra ireo ihany fa haparitaka manerana ny Nosy», hoy ny Dr Andrianarisoa Hermes, mpitsabo eo anivon'ny Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana (Oms). (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
Rabemananjara (nitranga in-1) : Ho henjankenjana ny lalao famaranana ho an'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara eo amin'ny baolina kitra rahampitso any amin'ny kianja Rabemananjara Mahajanga. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
FTFA (nitranga in-1) : Roméo Andriamihaja
November (nitranga in-8) : (@BilelB_) November 19, 2013
Sary noraisina tao Alzeria, niroboka tanteraka izahay #AlgeriaanyBrezila lety a. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
mitsikafona (nitranga in-1) : Ny inona no mitsikafona sa ny inona no atsikafona. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
kandidàn' (nitranga in-2) : Nolavin'ity Fitsarana ity araka izany ny vato azon'ny kandidàn' ny Hery vaovao ho an'i Madagasikara tamina distrika efatra. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
Brezila (nitranga in-3) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
niolaka (nitranga in-2) : Ankilan'izay rehetra izay anefa dia tsy niolaka mihitsy ny kandidà Camille Vital izay nahazo isam-bato 6,85% omaly raha nilaza fa «tsy misy maharesy lahatra ahy mihitsy ireo kandidà roa hiatrika an'io fifidianana fihodinana faharoa io ». (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
misolo (nitranga in-1) : Teratany frantsay izy nefa kosa misolo tena an'i Madagasikara, noho izy mipetraka eto efa ho 20 taona izao, amin'ireo fampisehoana samihafa ataony. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Bilel (nitranga in-2) : Tratran'ny fintaintainan'ny Mondialy ny tangoron'olona tao Algers, araka ity sary hita ao amin'ny kaonty Twitter an'ny mpisera Bilel. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
hanaovana (nitranga in-1) : « Ho fanamarihana io andro malaza io dia hikarakara diabe ny fikambanana hiainga eny Anosy, Amparibe ary Antanimbarinandriana ka hihazo ny lapan'ny Kolontsaina sy fanatanjahantena etsy Mahamasina, toerana hanaovana ny lanonana sy ny fiderana miaraka. (TILY ETO MADAGASIKARA-Mahavita miaina herinandro any an’ala i Sarah, tovovavy 22 taona)
Beforona (nitranga in-1) : Nitsoaka an-tongotra nihazo an'i Beforona ireo jiolahy. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
distintos (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
resahana (nitranga in-1) : Ho an'ireo mpandray anjara marobe, ny lohahevitra resahana amin'ny atrikasa dia loharanom-pampidirana lohahevitra vaovao mifandraika amin'ny fandaharana mivantana efa misy isaky ny herinandro ao amin'ny radio. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
Jean (nitranga in-4) : Voafidy hiatrika izany ny kandidà Jean Louis Robinson izay nitana ny laharana voalohany tamin'ny isam-bato 21,16% sy ny kandidà Hery Rajaonarimampianina izay nahazo vato 15,85%. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
Alzeria (nitranga in-5) : Indreto ny fihetseham-po voarakitra amin'ny filma amin'ny efatra amin'ireo lalao maharendrika na mahatafita ireny, izay nampihinjakinjaka tanteraka an'i Alzeria, Côte d'Ivoire, Kamerona ary Frantsa, raha levona tanteraka niaraka tamin'ny kiririoka farany kosa ny fanantenan'i Burkina Faso, Senegal, Okraina ary Tonizia hitodi-doha ho any Brezila. (SARIPIKA: Tsinjaka sy Ankona Amin'ny Fiadian-Toerana Mondialy Ho Any Brezila)
Rodrigues (nitranga in-1) : Mpanazatra maorisiana, seiseloa, kaomoriana ary avy any Rodrigues no mandray anjara hatramin'ny 6 desambra ho avy izao. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
Córdoba (nitranga in-1) : atrikasa fandefasam-peo mivantana miaraka amin'ny Radio Los Inestables
ongobe (nitranga in-1) : Areti-mifindra vokatry ny kaikitry ny moka ny ongobe. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
toetry (nitranga in-2) : Ny vinavina hita ankehitriny dia any amin'ny taona 2014 vao mety tena hirotsaka izany ary any amin'ny volana febroary any ho any kosa vao mety hisy ireo tondra-drano », hoy i Hubert Andriamparison, mpamantatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrianomby. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
Nanatanteraka (nitranga in-1) : Nanatanteraka fihaonana manokana teny amin'ny lapan'Ambohitsorohitra ny roa tonta, omaly. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
nampiasana (nitranga in-1) : Ny tao Fenoarivo Atsinanana indray dia voalaza fa nampiasa fiara tsy mataho-dalana an'ny faritra ny tenany, ankoatra ny fivoriana nampiasana fahefam-panjakana ny 15 oktobra. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Cercle (nitranga in-1) : fihaonan'ireo mpankafy ny antsan-tononkalo ny etsy amin'ny Cercle Germano-Malagasy rehefa sabotsy fahefatra amin'ny volana. (ANTSAN-TONONKALO-Hitondra ny «Tsikafona» ny Sandratra avy any Antsirabe)
Notoloran' (nitranga in-1) : Notoloran'ny minisiteran'ny vakoka sy ny kolontsaina ny mariboninahitry ny zavakanto sy ny asa soratra ary ny kolontsaina i Sylvain Subervie, mpanakanto eo amin'ny asa vy sy ny asa vato ary ny fanaingoana. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
Eddie (nitranga in-1) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Vimeo (nitranga in-1) : avy amin'ny Global Voices tao amin'ny Vimeo. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Tato (nitranga in-1) : Tato ho ato, saika ny faritra rehetra eto Antananarivo, hatrany amin'ireo tanàna manodi­dina no miaina anatiny haizina. (FAMATSIANA HERINARATRA-Sesilany ny fahatapahan-jiro)
lahatsary (nitranga in-2) : Mpandray anjara hafa kosa mahay momba ny fikirakirana feo sy lahatsary, ary liana tamin'ny GV podcasts. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
nampiseho (nitranga in-1) : Nianatra fanaovan-tsary ara-indostrialy ny iray tamin'ireo mpandray anjara, ary nampiseho anay ny bilaoginy, Selouk. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Tunisie (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
noentina (nitranga in-1) : Fampiasana fitaovam-panjakana sy fahefam-panjakana noentina nanaovana fampielezan-kevitra no tena niampangana an'i Hery Rajaonarimampianina. (FIHODINANA VOALOHANY-Nifatraran’ny fitoriana maro i Hery Rajanaonarimampianina)
Stade (nitranga in-1) : Tao anaty fahagagana no nandresen'i Frantsa 3-0 tamin'ny lalao miverina, nitraka horakora-pifaliana tamin'ny mpanohana an'i Frantsa sy fahadisoam-panantenana teo amin'ny mpanohana Okrainiana:
Diasivy (nitranga in-2) : com/L8YTbiUDYo
Camille (nitranga in-1) : Ankilan'izay rehetra izay anefa dia tsy niolaka mihitsy ny kandidà Camille Vital izay nahazo isam-bato 6,85% omaly raha nilaza fa «tsy misy maharesy lahatra ahy mihitsy ireo kandidà roa hiatrika an'io fifidianana fihodinana faharoa io ». (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
Dakar (nitranga in-1) : Senegal
Ampandrianomby (nitranga in-1) : Ny vinavina hita ankehitriny dia any amin'ny taona 2014 vao mety tena hirotsaka izany ary any amin'ny volana febroary any ho any kosa vao mety hisy ireo tondra-drano », hoy i Hubert Andriamparison, mpamantatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrianomby. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
fana­foanana (nitranga in-1) : miroso amin'ny fana­foanana ny aretina notsi­notsinoavina. (ADY AMIN’NY BILARIZIOZY SY ONGOBE-Faritra dimy no hizaràna fanafody)
Olympique (nitranga in-2) : Ny ekipan'ny Saint Denis Olympique, tompondaka farany nandresy ny Stef'Auto tamin'ny taona 2012, no hifanandrina indray amin'izy ireo eo amin'ny famaranana anio. (VOLLEY BALL – CCCOI-Tafita amin’ny famaranana ny Stef’Auto)
mifehy (nitranga in-1) : Notsindriany ihany anefa fa tokony hanaraka ny lalàna mifehy ny fifidianana izay endrika fanohanan'ny Filohan'ny tetezamita azy izay. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
Rueter (nitranga in-1) : com/gxirTLir8v
ahian' (nitranga in-1) : Bokan-trosa
fifanohanana (nitranga in-1) : Notsindriany ihany anefa fa tsy maintsy hisy izany fifanohanana izany ary vonona hisokatra amin'ireo kandidà na antoko vonona ny hanolo-tanana azy ny tenany. (KANDIDA HIATRIKA NY FIHODINANA FAHAROA)
nahatratra (nitranga in-2) : «Manaporofo izany ny fahabetsahan' ny tahan'ny fandraisan'anjaran'ireo mpifidy izay nahatratra 61%», hoy ity kandidà voafidy hiatrika ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa ity, taorian'ny fanambarana ofisialy ny voka-pifidianana nataon'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) tetsy Ambohidahy. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
nifindra (nitranga in-1) : Niara-niasa izy mirahalahy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina saingy nifindra tampoka tany amin'ny AS Saint Michel i Raux teny antenantenan'ny fifaninanan' Analamanga. (TELMA COUPE DE MADA-Hiady anarana i Auguste Raux sy Auguste Rabemanantsoa)
LOUIS (nitranga in-1) : JEAN LOUIS ROBINSON-«Efa maika hanana Filoha vaovao ny Malagasy»
atsantsa (nitranga in-1) : Fadiana indrindra ny mihinana atsantsa, geba, “sardine”, “sardinelle”, soka-dranomasina amin'izao. (FIHINANANA HAZAN-DRANOMASINA-Nahitana fihenana ny fanjifana trondro)
diviziona (nitranga in-1) : Rahampitso kosa dia ny sokajy vehivavy Top 8 no hanomboka izany arahin' ny sokajy diviziona 1 elita 1 na ny «Top 14». (BAOLINA LAVALAVA – ANALAMANGA-Hanao sesilany ireo manasa-dalana eny Andohatapenaka)
fampiasa (nitranga in-2) : Tsy nisy anefa ny zavatra may fa ny fitaovana iray fampiasa ao an-tokantrano «Lecteur Divx» no simba. (Manokatra Lafin-tany Vaovao Ho An'ny Radio Los Inestables)
Notsipihanay (nitranga in-1) : Notsipihanay fa ny lahatsoratra GV rehetra dia avoaka amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana Creative Commons. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
Andrianainarivelo (nitranga in-1) : Miankina amin'ny fanapahan-kevitr'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny Malagasy miara- miainga izany hoe mety ho fanohanana kandidà amin'ny fifidianana Filoham-pirenena izany», hoy i Hajo Andrianainarivelo omaly taorian'ny fanambaràna ny voka-pifidianana ofisialy nataon' ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces) tetsy Ambohidahy. (FIHODINANA FAHAROA-Misalasala hanohana kandidà i Hajo sy Roland Ratsiraka)
nihiaka (nitranga in-1) : Mbola nilaza ho nahita izany hazavana be nitaratra nihodinkondina nandritra ny fotoana vitsy avy tao am­bony rihana izany ihany koa anefa ireo fianakaviana hafa monina ao ambany rihana tamin'io fotoana io, ary nihiaka mafy sy nian­tsoantso raha nahatazana izany. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
football (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
efitrano (nitranga in-2) : Vao nigadona ny tamin'ny 10 ora maraina omaly dia niditra ny efitrano malalaka ao amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana ireo mpikambana 18 ao amin'ny Ces nilaza ny voka-pifidianana ofisialy. (TRANGA HAFA KELY TENY ANDOHARANOFOTSY-Varatra tafiditra tao an-trano tsy nandoro na inona na inona)
Nandika (nitranga in-3) : Azonao vakiana amin'ny dika an-tsoratra ny feo renao:
Coco (nitranga in-3) : «Efa nahare feo aza izahay fa mikasa ny hamoaka rakikira amin'ireo sanganasan'i Médicis izy ireo», araka ny fanazavan'i Nicoletta Rinisoa na Coco, renin'i Vavara Médicis. (TSY ARA-DALANA-Misy mampiasa tsy miera ireo sanganasan’i Medicis)
الأصوات (nitranga in-1) : الأصوات العالمية: من نكون. (Raki-tsoratra Avy Amin'ny GVMeetup Ao Kairo)
milamindamina (nitranga in-1) : Toa tsy misy akory izay mba faritra heverina fa milamindamina fa dia anjakan'ireo izay manana basy «Kalachnikov» na farafaharatsiny basy poleta. (Bao tsy mivily-RAHARAHA ANATINY)
biraon' (nitranga in-1) : Milaza ny hanakatona ny biraon'izy ireo manerana ny Nosy ny mpiasa eo anivon'ny Tahirim-bolam-panjakana. (Tapatapany)
Andriamparison (nitranga in-1) : Ny vinavina hita ankehitriny dia any amin'ny taona 2014 vao mety tena hirotsaka izany ary any amin'ny volana febroary any ho any kosa vao mety hisy ireo tondra-drano », hoy i Hubert Andriamparison, mpamantatra ny mety ho toetry ny andro etsy Ampandrianomby. (TOETRY NY ANDRO-Amin’ny taona 2014 vao mety hahavanona ny fahavaratra)
iasan' (nitranga in-1) : tsy nisy ny fahagagana teny Ambohidahy, foiben'ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana sy iasan'ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (Ces). (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
navoakan' (nitranga in-6) : fanapahan-kevitra efa raikitra ary tsy azo ihodivirana intsony ny didim-pitsarana laharana 01-Ces/D navoakan'ny Fitsarana manokana ny fifidianana (Ces) omaly teny Ambohidahy. (Raha…RAHA-Hafatra « CESilany »)
ahiana (nitranga in-1) : Omaly maraina dia nahatratra 13 ireo olona ahiana ho nanana andraikitra tamin'ity fanafihana ity no nosamborina ka isan'izany ilay filoham-pokontany. (FANAFIHANA MPIVAROTRA TANY BEFORONA-Nosamborina ilay sefo fokontany voalaza fa nitahiry jiolahy)
henjakenjana (nitranga in-1) : Tsy tian'ny olona loatra ny governemantan'ny firenena any amin'ny fiarahamonina lahika ao an-toerana noho ny fepetram-pivavahana henjakenjana ao aminy, ka mety ho lasa jerena ho fandresen'ny governemanta ny fandresen'ny ekipam-pirenena eo amin'ny football :
Anisan' (nitranga in-1) : Anisan'ireo sangansany nisongadina ireo miaramila mpiandry miisa 1000 izay hiarahan'ny vy sy ny vato madio. (ASA VY SY VATO-Notolorana mariboninahitry ny zavakanto i Sylvain Subervie)
teto (nitranga in-1) : Nisantaran'izy ireo izany ny «Nofy-Tiako» an'i Rima teto Antananarivo ny volana septambra, «Nizahatany» kosa tany Toamasina ny 16 novambra teo…
2009 (nitranga in-3) : HERY RAJAONARIMAMPIANINA- «Vonona hanohy ny tolona tamin'ny 2009 aho»
mitokatokana (nitranga in-1) : Miaina anaty tontolo hafa mihitsy izy, mitokatokana, hany ka voaroaka tany amin'ny sekoly nianarany. (FITOKANA-MONINA-Dona ho an’ny havan’ity zaza 3 taona ity ny tsy hahasitrana azy intsony)
básico (nitranga in-1) : Tamin'ny mailaka vao haingana ho an'ny Rising Voices i Sol del Carpio, iray amin'ireo mpandrindra ny tetikasa, nanoratra hoe,
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=Mpikambana:Bot-Jagwar/tenin%27ny_gazety/23_Novambra_2013&oldid=13230117"
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2013 amin'ny 21:08 ity pejy ity.